ညီအဈမနှဈယောကျ – My Blog
ဩ…….ဟိုမှာ နံပါတျ ၈ လာနပွေီ…. လာသှားမယျ ဟုတျတယျလေ… ခတျေကွီးကိုက သုတျသုတျစား သုတျသုတျသှားမှ စကားကောငျးနလေို့ ကြှနျတျောတို့စီးရမယျ့ကားလာနပွေီ။ မပွတျသေးတ့စဲ ကားကိုအတငျးဖွတျပွီး. … မှတျတိုငျကြျောရပျတဲ့ကားနောကျကိုခှေးတဈကောငျလိုပွေးလိုကျရတယျ မပွောခငျြပါဘူးဗြာ…မနကျနဲ့ ညနဆေို ကားစီးရတာလူနဲ့ကိုမတူဘူး…ခတျေကွပျကွီးထဲမှာကိုရှေ စပါယျရာတှကေလညျးယဉျကြေးပါပတေယျ။ သငျတနျးဆငျးလာသလိုပါဘဲ။
““ကဲ…လကျမှတျဝယျကွပါ….တဈကပျြလေးနဲ့လကျမတို့ရစနေဲ့….ဟိုဘကျကဘကွီးရှတေို့းပါ။ မကနြေပျရငျရှမှေ့တျတိုငျဆငျးနခေဲ့။ရှကေ့ညီလေးပိုကျဆံထုတျထားကှာ….တဈကပျြလေးကို သူတောငျးစားလိုလိုကျတောငျးနရေတယျ”” ““ကားခပေးကွပါဗြ။”” အဲ့ဒါပဲကွညျ့တော့….ကြှနျတျောလညျး အအျောခံရမှာကွောကျတာနဲ့…တဈကပျြကို နှမွောတသစှာနဲ့ထုတျပေးလိုကျရပါတယျ။ ““စံပွလား…စံပွ…ရှထေ့ကျှထားကွပါခငျဗြားတို့မေးနတော နဲ့မိုးလငျးတော့မှာပ။ဲ ရှတေို့းပါ…မှတျတိုငျပါတယျဆရာရေ””
အိုး .. စိတျညဈစရာကောငျးလိုကျတာ…တကျကွဆငျးကွနဲ့ ဒီလိုပဲနတေို့ငျးကွုံနရေတော့…ဒီအခြိနျရောကျရငျရူးခငျြတယျ… အဲဒီအခြိနျမှာ ကြှနျတော့ကိုယိုငျဆငျးသှားအောငျ ကွိမျခွငျးကွီးနဲ့တိုကျခံလိုကျရပါတယျ။ စိတျတိုတိုနဲ့ရနျတှမေ့ယျလုပျတော့…လားလား…တျောတျောခြောတဲ့ကောငျမ လေးတဈယောကျပဲ။ ““ပေး…ညီမ…ဒီခွငျးကွီးနဲ့ဆို ကားအလယျကောငျမှာ လူတှဒေုက်ျခရောကျနမေယျ။”” ကောငျမလေးက ကြေးဇူးတငျတဲ့အပွုံးနဲ့ ခွငျးတောငျးကိုကမျးပေးလိုကျပါတယျ။
ကားကလညျး ကွပျသထကျကွပျလာတာမို့…ခွငျးတောငျးမရှိတော့တာနဲ့သူနဲ့ကြှနျတျောဟာကျောနဲ့ကပျထားသလို ကပျနပေါတယျ။ ကောငျမလေးကတော့အနခေကျပုံပဲ။ ကြှနျတျောကတော့ဘယျလိုနမေယျထငျလဲ။ ကောငျမလေးက တောငျ့တောငျ့တငျးတငျးလေးဗြ။ ကွညျ့ရတာပနျးရောငျးပုံပဲ။ ခမျနှမျးနှမျးကလေးဆိုပါတော့…..ရုပျကလေးကတော့ သနားကမားလေးလေးပဲ…..ဆံပငျကိုရှကေ့ ဆာမူရိုငျးကညှေပျပွီး နောကျမှာ ကဈြဆံမွီးလေးခညျြထားတယျ။ မကျြလုံးလေးတှကေ ဇငျယျောတောငျလို ကော့နပွေီး မကျြတောငျကတြော့ ကော့ပွီးနကျနတောဲ့။
မကျြနှာတဈခုလုံးမှာ အလှဆုံးကမကျြလုံးပဲဗြာ…..ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ ခဈြခငျြလာတယျ…..ဝိုငျးပွီးညိုတိုတိုနဲ့ ရှနျးလဲ့နလေရေဲ့။ နှာခေါငျးလေးဟာ နဖူးကနေ ပွဆေငျးလာပွီး နှာဖြားနဲနဲကော့တယျ။ လနျလနျလေးပေါ့။ နှာခေါငျးလေးလဲ တဈမြိုးခဈြစရာလေးပဲ။ သူ့မကျြနှာမှာ အဆိုးဆုံးကတော့ ပါးစပျပါပဲ။ တျောတျောပွဲတယျခငျဗြ။ နှုတျခမျးကလညျးထူနတေော့ ကနျြတောတှမေလှရငျတော့ သူဟာ သိပျရုပျဆိုးသှားလိမျ့မယျထငျတာပဲ…..အခုတော့ သိပျခဈြစရာလေးပေါ့ဗြာ။ မကျြနှာလေးထောငျ့ကကြလြေးမို့ စိတျဓါတျခိုငျမာမဲ့ပုံပဲ။
သဘောက ဘဝကိုရဲရဲရငျဆိုငျမယျပေါ့ဗြာ။ အခုတော့…..ကြှနျတျောနဲ့ ပူးကပျနလေို့ ရဲရဲရငျမဆိုငျရဲပဲ…..ရှိုးတိုးရှနျ့တနျ့ဖွဈနတေယျ။ သူ့ရဲ့လုံးကဈြတဲ့ ရငျသားတှဟော ကြှနျတေျာ့လကျမောငျးကို တငျးတငျးကွီး ဖိကပျထားလရေဲ့…..အကငြ်္ီပါးလေးဝတျလာခဲ့တာကိုပဲ ကြေးဇူးတငျရအုံးမယျ။ သူလဲအကငြ်္ီအနှမျးရှနျသားလေးပဲ။ ဘျောလီခံနလေို့ နနဲေဲ ထာငျနတေယျ…..ကားတဈခကျြဆောငျ့တိုငျး သူ့ရငျသားအိအိလေးတှဟောကြှနျတေျာ့ရဲ့ကွှကျသားနဲ့တငျးမာနတေဲ့ လကျမောငျးတှနေဲ့ဖိပွီး ခပြေေးသလိုဖွဈနပေါတယျ။
နောကျဆုတျလို့လဲမရ။ဘေးရှောငျလို့လဲမရနဲ့ အခကျအခဲတှနေ့ရှောတယျ။ အိုး…..ကြှနျတျောလညျး နောကျဆုတျခှငျ့ဘယျပေးမလဲ…..ကားပျေါမှာ ထုတျဆီးတိုးပဈမယျပေါ့….. ကောငျမလေးရဲ့ပေါငျတှနေဲ့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ပေါငျတှပေူးကပျနတေယျ။ ကဈြကဈြတငျးတငျးလေးတှမေို့အရသာထူးလှပါတယျ…..မသိမသာလေး သူ့ခွထေောကျနှဈခြောငျးကွားထဲကြှနျတေျာ့ခွထေောကျကိုရအောငျထိုးသှငျးလိုကျမိတယျ။ ကောငျမလေးကလဲသိတယျဗြ…..အထညျ့မခံဘူး။ပေါငျနှဈခြောငျးစိထားပွီး…..ကြှနျတေျာ့ခွထေောကျတှေ ကို ဒူးနဲ့ဖိတှနျးထားတယျ…..ရှငျရှမေ့တိုးနဲ့နျော….. ဆိုတဲ့သဘောမြိုးနဲ့ကြှနျတေျာ့ကိုစိုကျကွညျ့လာပါတယျ။
ရပါတယျလေ။ စောငျ့ကွညျ့ရတာပေါ့။ စိတျထဲက…..ဘုရားပှဲလှညျ့နတေယျ…..ခြှေးစီတှကေနြပွေီ. ….ရငျထဲမှာမောနတေယျ။ ရမကျဇောတှပေေါ့။ ““ဝုနျး…..”” ““အမလေး…..ဟဲ့…..ဘယျလိုမောငျးတာလဲ။”” ကားက တဈခကျြဘရိတျအုပျလိုကျတော့ လူတှအေကုနျလုံး အခွပေတျြကုနျပါတယျ….. အခှငျ့အရေးစောငျ့နတေဲ့ ကြှနျတောလညျး ယိုငျသှားတဲ့ကောငျမလေးကို ဖမျးထိနျးလိုကျသလို….. ဟသှားတဲ့ကွားမှာလညျး ကြှနျတေျာ့ခွထေောကျကိုထိုးသှငျးလိုကျပါတယျ။
သူ့လကျမောငျးကို ကိုငျထားတဲ့လကျတှဟော တျောတျောနဲ့မဖွုတျမိဘူး….. သူကလဲ ဘာမှမပွောဘူး….. ဒါပမေယျ့နောကျမှသတိဝငျလာပွီး အတငျးရုနျးထှကျလိုကျပါတယျ။ …..သူ့ပေါငျကွားထဲဝငျနတေဲ့ ပေါငျကိုတော့ ပွနျထုတျလို့မရတော့ဘူး….. ခရီးလှနျနပွေီလေ….. ဟဲ….. ဟဲ….. ။ ပေါငျကိုတောငျ့ထားပမေယျ့ ကားအမောငျးကွမျးတော့….. တရှရှေ့နေဲ့….. ပူနှေးတဲ့…. ပေါငျခှကွားကို….. ကြှနျတေျာ့ရဲ့ပေါငျရငျး ဝငျသှားပါတော့တယျ။ အတှငျးခံဘောငျးဘီ ဝတျထားပုံမရဘူး….. ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ပလကေပျပုဆိုးနဲ့ သူ့ရဲ့တရုတျပါတိတျကိုကြျောပွီး သူ့ဆီးခုံမှေးတှနေဲ့….. ခပျကွမျးကွမျးအတှကေို့….. ခံစားနရေတယျ။
ရှကျလို့ထငျပါရဲ့…..ခေါငျးကလေးငုံ့ထားတယျ….. ကြှနျတေျာ့ရငျဘတျပျေါ….. ခေါငျးမှီထားသလိုပါပဲ….. ဘေးအမွငျကတော့…. ရညျးစားတှပေေါ့…..။ ကားတဈခကျြခုနျတိုငျး တဈခကျြကှတေို့ငျး ဘရိတျအုပျတိုငျး သူ့စောကျဖုတျ နှေးနှးလေးကို ပေါငျနဲ့ ပှတျနသေလိုပါပဲ။ နောကျကလူတှကေလညျး ဖိတှနျးနတေော့…..သူ့ကို ထပျပွီးနှိုးဆှနသေလိုပါပဲလား။ သူလဲ မောဟနျရှိနပေါတယျ…..အသကျရှုသံပွငျးပွငျးလေးတှကေို ကွားနရေတယျလေ။ အခွအေနကေောငျးလာတယျတော့ထငျတာပဲ။
အဆငျ့တကျလို့ ထအျောရငျ….. သောကျရှကျပဲ….. ရဲရငျမငျးဖွဈလို့ဆိုထားတယျမဟုတျလား…..အခဈြ ဧကရာဇျဘှဲ့ခံဖို့ ဘိသိတျပလ်ျလငျကိုစလှမျးလိုကျတယျ….. ဘယျလိုလှမျးလဲသိလား….. ဘယျလကျကို အသာလေး အောကျခလြိုကျတယျ….. ညောငျးသလိုလိုပေါ့…..။ နူးညံ့တဲ့ရငျသားတှကေို လကျခလယျနဲ့ ပှတျမိတယျ….. ဖမျးတိငျလိုကျမလို့ပဲ….. ဒါပမေယျ့….. စောငျ့ဦးလေ။ ဗိုကျကိုအသာလေးမှေးရငျး ရှပျလိုကျပွီး သူ့ဆီးခုံမှာ ဂိတျဆုံးသှားတယျ….. တဈခကျြနောကျတှနျ့သှားပမေယျ့…..နောကျတှနျ့သှားတာကိုက လကျကို နရောပေးလိုကျသလို ဖွဈသှားတယျ။
လူကကပျြတယျမဟုတျလား….. စောကျဖုတျ တညျ့တညျ့ကို….. လကျခုံကရောကျသှားပွီလေ။ အသာလေးပီတျပေးနမေိတယျ…..သူရဲ့ လကျတဈဖကျဟာ ကြှနျတေျာ့လကျကို အသာဆုတျကိုငျလာပါတယျ။ အိုး…..ဒါဆိုရငျ အဆငျပွပွေီပေါ့…..ကွောကျစရာမလိုတော့ဘူး ရဲရဲသာ…..လှမျးတော့။ ““ပဲခူးကလပျပါလား…..ပဲခူးကလပျ”” နားနားကပျပွီးနှားသိုးလိုအျောတဲ့ စပယျရာအသံကွောငျ့ မိုးကွိုးပဈခံရသလို တုနျသှားတယျ ““ခှေးမသား”” လို့စိတျထဲက မတျေ်တာပို့မိတယျ။ သူ့ရဲ့အေးစကျစကျ လကျကို ရုနျးပွီး စောကျဖုတျလေးကို လကျခုံနဲ့ ပွနျပှတျပေးမိတယျ
သူဟာ နှုတျခမျးကိုကိုကျပွီး ကြှနျတျောလကျဖြံကို အတငျးကပျပွီးတှနျးထုတျနလေရေဲ့….. ဘယျရမလဲ….. ယောကျြားဆိုတာ….. ဒီဘကျမှာ ဇှဲက နှားသိုးတဈကောငျနီးပါးရှိတာမဟုတျလား။ စာအုပျကိုကိုငျထားရကျနဲ့ဘဲ….. လကျခလယျကို အသာထုတျရငျး စောကျဖုတျတလြှောကျ ထိုးပေးနမေိတယျ။ အတှဲကွောငျးလေးထဲ ရောကျသှားပါရဲ့….. ကောငျမလေးခမြာ ကြှနျတေျာ့ခွထေောကျက သူ့ပေါငျကွားထဲ ရောကျနတေော့ ပေါငျလဲစိမရ….. လကျကိုလဲ တှနျးထုတျဖို့အားက ကြှနျတျောတို့လောကျမရှိ ထဘီကိုတှဲပွီး စောကျဖုတျထဲ လကျတဈဆဈလောကျ ဝငျနမေိတော့ အသာလေးကလိနမေိတယျ။
လကျအနောကျပွနျဖွဈနလေို့ စိတျရှိသလောကျ မလှုပျရှားနိုငျဘူး….. ဒါနဲ့…..။ ““ညီမ….. ဒီစာအုပျလေး ခဏလေးရယျ”” ဟုတျတယျလေ….. ဘယျလိုမှ အကွံမထုတျနိုငျတော့ဘူး။ ကောငျမလေးလဲ ဖီးလျဝငျနရောက အလနျ့တကွားယောငျယမျးပွီး ကိုငျလိုကျပါတယျ။လှပျလပျသှားပါပွီ။ ကြှနျတော့လကျထဲ ပွနျသှငျးမလိုလုပျလို့ ကမနျးကတမျးနဲ့ စောကျဖုတျလေးကို လကျဝါးနဲ့ အုပျကိုငျလိုကျတယျ….. ကောငျမလေးခမြာ ဘာလုပျလို့ ဘာကိုငျရမှနျးမသိဘူး….. အတျောရှကျသှားဟနျ တူပါတယျ….. မကျြနှာလဲ ရဲလို့….. နားရှကျတှလေဲ တှတျတှတျနီလို့လေ…..။
သူ့ရဲ့….. အထူးနယျမွကေိုပိုငျစိုးပိုငျနငျးနဲ့ အုပျထားကြှနျတျောကို ဘာလုပျရမှနျးလဲ မသိပါဘူး….. စာအုပျကိုလဲမခနြိုငျ လကျတဈဖကျကလဲ….. မယိုငျအောငျ ထိနျးထားရတာနဲ့….. အတျောကို ဒုက်ျခရောကျနပေါတယျ။ စောကျဖုတျကို အသာပှတျပေးရငျး စောကျမှေးလေးတှကေို ဆှဲဖှပေးနမေိတယျ….. စောကျဖုတျ အကှဲကွောငျး လေးထဲကိုလကျသှငျးပွီး မဉျြးဆှဲပေးနမေိတယျ…..။ ကောငျမလေးခမြာ….. အသကျရှုပွငျးလာပွီး နှုတျခမျးတှေ တုနျလာတယျ…..။ ကြှနျတျောနှဈယောကျရဲ့ အောကျပိုငျးကအဖွဈအပကျြတှကေို ဘယျသူမှ သတိမပွုမိကွဘူး…..။
ထဘီရဲ့ ခပျကွမျးကွမျး အရသာ စောကျဖုတျထဲမှာ ခံလိုကျရလို့ထငျပါရဲ့ တှနျ့ကနဲ ဖွဈသှါားတယျ။ နှုတျခမျးလေးကို ကိုကျရငျး ကွိတျခံနပေုံဘဲ….. အပြိုစငျလေးထငျပါရဲ့….. ဒီထကျ ထကျပွောရရငျတော့ ကျောတာပဲ….. ပါကငျကို စပါယျရှယျ ဖောကျတံနဲ့ ဖောကျရအုံးမယျ။ ဘူတာရုံ မှတျတိုငျကြျောတော့ လကျထဲမှာ စိုတိုတိုဖွဈလာတယျ….. လာပွီထငျပါရဲ့….. ဘကျဈကားပျေါမှာ လုပျရတာဆိုတော့ စောကျစိကိုရှာမတှဘေူ့း…..။ စှတျလုပျရငျး ထဘီခပျကွမျးကွမျးက စောကျစကေို့ ခဏခဏပှတျပေးမိလို့ ဆငျးလာတယျထငျပါရဲ့….. တဖွေးဖွေးနဲ့….. ရဲလာပါတယျ။
သူလဲ….. သိပုံပဲ….. သိပျရှကျနတေယျထငျပါရဲ့ ခေါငျးကိုသာ အတှငျ ငုံ့ထားတယျ။ ခေါငျးကိုလနေဲ့ အသာလေးမှုတျပေးလိုကျမိတယျ။ စိတျအိုကျနမှောပဲလို့ တှေးမိလို့ပါ….. ။ ဟုတျလဲဟုတျတယျ….. ခေါငျးလေးမော့ပွီး လကေိုခံယူနတေယျလေ….. နဖူးဝငျးဝငျးလေးကို အနမျးတဈပှငျ့ခွှလေိုကျတယျ။ ကောငျမလေးလဲကွံရာမရပဲ လူကို ကိုယျနဲ့ ဖိတှနျးပါလရေော….. အရှကျပွပေေါ့…. လကျကတော့ စောကျဖုတျမွုပျနတေုနျးပဲ….. အရညျတှရှေဲအိလို့ပေါ့…..။ ““ခြာတိတျ….. မော့ကွညျ့စမျး””
ကွှနတြော့ရဲ့ မောဒြနအြသုံးအနှုံးကှောငြ့ ဖတွခြနဲ မော့ကှညြ့လိုကတြော့….. အို….. မကွဝြနြးမှာ မကွရြညတြှပှညြေ့လို့….. အိုငပြှီးေ စောကဖြုတကြှားထဲက လကနြှုတပြှီး အပေါကြအသာလေးပှတပြေးနမေိတယြ။ ခဏနမှေ သူ့ခါးကို ရဲရဲတငြးတငြးဖကပြှီး သူ့ကို ရငခြှငထြဲသှငြးထားလိုကတြယြ….. ခါးကလဲဗွာ သေးလိုကတြာ….. ထှာဆိုငလြောကပြဲရှိတယြ။ သူကတော့ ကွှနတြော့ရြငဘြကမြှာ ခေါငြးမှီရငြး ငှိမနြလရေေဲ့။ နှငြးဆီနံ့လေး သငြးနတယြေ။ တငပြါးတှဟော ဂှမြးဆိုငလြိုနူးညံ့ပှီး လကကြအသားထဲမှုပဝြငသြှားတယြ….. ဖငကြှားထဲတော့လကမြထဲ့ရဲသေးဘူး….. သိပရြှကသြှားအုံးမယြ…..။
““ နံမယျ ဘယျလိုချေါလဲ….. ”” မဖွပေါဘူး…..။ ““ ခြာတိတျကလညျးကှာ….. ဘာလဲကို့ကို စိတျဆိုးနလေား….. မဆိုးပါနဲ့ကှာ….. မွငျမွငျခွငျး ခဈြမိသှားလို့ပါ….. ပွောလေ….. နံမယျလေး ပွောပါ ”” မပှငျ့တပှငျ့နဲ့ ““ ဘာလို့ပွောရမှာလဲ ”” ““ ဟဲဟဲ သိခငျြတာပေါ့….. မငျးလေးရဲ့ အခဈြဆုံးကိုကို ဖွဈလာတော့မှာပဲကှာ….. ဒါဆို ဒို့နံမယျပွောမယျ….. ကြျောဝငျးမောငျတဲ့….. ဒုတိယနှဈ သခငြ်္ာအဓိက ကြောငျးသားတဈယောကျပါ….. နတေဲ့နရောကတော့ မငျးပွောမှ ကိုကိုပွောမယျ….. ကဲ….. မငျးနံမယျပွော….. မရှီးနဲ့နျော….. အိမျအထိလိုကျမှာ….. တျောကွာ မင်ျဂလာဆောငျဖိတျစာမှာ နံမယျလိမျကွီးပါနအေုံးမယျ။
”” မကျြလုံးလေးပွူးကွောငျသှားတယျ….. သူ့ပါးလေးကိုငုံ့မှေးလိုကျတော့….. ဘေးက ကုလားတဈယောကျက ကားရိုကျတယျထငျပွီးပွုံးကွညျ့နပေါတယျ။ ““ ပွောလေ နံမယျ….. ပွောပါနျော ”” ““ လိုကျမနှောကျရှကျရဘူးနျော….. ခြိုခြိုတဲ့ ”” ““ အိုး ယဉျလိုကျတဲ့နံမယျလေး….. ခိုကျသှားပွီကှာ….. လူကွောငျ့နံမယျပါလှသှားပွီ ”” အသာကပျညုရငျးနဲ့ -ီးတောငျတောငျကွီးနဲ့ ဗိုကျကို ပှတျပေးနမေိတယျ….. မသိဘဲနဲ့တော့နမှော မဟုတျဘူး။ မသိခငျြယောငျဆောငျနတေယျ….. -ီးဟာဟိုထိုးဒီထိုးနဲ့။
““ ကဲ…. ဂိတျဆုံးပွီ ”” ဟိုကျ….. သောကျခှေး….. ဘယျလိုဂိတျဆုံးသှားတယျမသိဘူး….. လူလဲခြောငျနပွေီ….. ။ ဒါပမေယျ့ခေါငျးပိုငျးမှာ ရပျနမေိလို့ပေါ့….. နို့မို့ဆိုရငျ စောကျရှကျပဲ။ ကြှနျတျောဆငျးရမဲ့မှတျတိုငျက အမြားကွီးလှနျနပွေီ….. မတတျနိုငျဘူး….. သူ့တောငျးကို လှမျးယူပွီး သူ့လကျတဈဖကျကို ဆုပျကိုငျလို့ ကားပျေါကဆငျးခဲ့ပါတယျ။ ““ ဘယျမှာနတောလဲ ”” ““ မလိုကျခဲ့နဲ့….. အိမျကမွငျသှားရငျ အဆူခံနရေမယျ….. ”” ““ မလိုကျပါဘူး….. နရောသိရငျတော့….. တျောပါပွီ။ ”” ““ ဟိုဘကျက စိုကျခငျးထဲမှာ….. အိမျကတော့ ကရငျခွံမှာ….. အခုပနျးရာသီမို့ စိုကျခငျးထဲလာနတော ”” ““ စိုကျခငျးအထိ လိုကျပို့ပေးမယျလေ….. ””
““ ဟငျးအငျး….. နပေါစေ….. ”” ““ အိုကှာ….. ပို့ပေးရမှ ပွနျမယျ ”” ““ ဒီထကျတော့ကြျောပွီးတော့ မလိုကျရဘူးနျော ”” ““ အငျးပါ….. အခဈြကလေးရယျ ”” သူ့လကျကို ဖွထေုတျပမေယျ့ ကြှနျတျောကမလှတျပါဘူး….. အတငျးဆှဲထားတော့ မရုနျးသာပဲ လကျတှဲလမျးလြှောကျခဲ့ပါတယျ။ သူ့လကျထဲမှာ ကြှနျတော့မှတျစုစာအုပျလေး ရှိသလို ကြှနျတော့လကျထဲမှာလညျး သူ့ခွငျးတောငျးရှိနပေါတယျ။ အဆငျကိုပွလေို့….. ည ၈နာရီကြျောမို့ လူရှငျးနပေါပွီ….. သူ့ခါးလေးကို ဖကျခငျြပမေယျ့ သူ့အပိုငျမို့ အတငျးမလုပျခငျြဘူး။
အရိပျကောငျးလှတဲ့ ကုက်ျကိုပငျကွီးအောကျရောကျတော့ နှငျပါလရေော သူကတော့ သှားနကြေ လမျးမို့ထငျပါရဲ့ ကြှနျတျောတောငျ ခပျလနျ့လနျ့ပဲ။ ““ ပွနျရတော့မှာလား နှုတျဆကျအနမျးလေးပေးခဲ့ပါအုံး ”” ““ အိုး ”” ဆကျခနဲ ရုနျးပွီး ထှကျပွေးမလို လုပျတဲ့ ခြိုခြိုရဲ့ ခါးသိမျကလေးကို လှမျးဖကျပွီး ရငျခှငျထဲ ဆှဲသှငျးလိုကျပါတယျ။ ရှငျမတောငျ သနပျခါးနံ့သငျးနတေဲ့ ပါးနှဈဘကျကို ဘယျပွနျညာပွနျမှေးပဈလိုကျတယျ ထိတျလနျ့ပွီး ခပျဟဟဖွဈနတေဲ့ နှုတျခပျးလေးကို ငုံပွီးစုပျယူလိုကျပါတယျ။
တဈခါတညျး ကော့တကျပွီး လကျထဲက စာအုပျပါလှတျခလြိုကျပါတယျ တဈခါမှ အတှအေ့ကွုံမရှိသေးတဲ့ အပြိုစငျလေးပဲ။ ကြှနျတျောလှတျခလြိုကျတဲ့ ခွငျးတောငျးဟာ တဈလိမျ့လိမျ့နဲ့ အတျောဝေးဝေးကို ရောကျသှားပါတယျ မွပွေငျကို မကျြစိကစားကွညျ့တော့ မွကျခွောကျတှနေဲ့ သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျးဖွဈနတောတှရေ့ပါတယျ အားမှ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပြျောပှဲစား လာအုံးမှ အခုတော့။ ကော့ကော့လေးဖွဈနတေဲ့ ခြိုခြိုကိုမကျြခငျးပျေါ အသာပကျလကျလှဲခပြေးလိုကျပါတယျ လရောငျအောကျမှာ မကျြစိမှိတျအိပျနတော နတျသမီးလေးကနြတောပဲ မကျြနှာပျေါ စာအုပျမိုးပွီး နမျးရငျးလကျတဈဖကျက ရငျစိအကငြ်္ီလေးရဲ့ နှိပျကွယျသီးတှကေိုတဈလုံးခငျြးဖွုတျနတေယျ။
အကငြ်္ီကြှတျသှားတယျဆိုရငျပဲ လရောငျကွောငျ့လား မသိဘူး။ ကြောကျဆဈရုပျလေးလို ဖှေးနတေဲ့ သူ့ရငျဘတျနဲ့ ဗိုကျသားပွငျဟာထငျးကနဲပျေါလာပါတော့တယျ။ ““ ကိုကြျောဝငျးမောငျ ခြိုကွောကျတယျ သှားပါရစေ ရှငျ့ကိုလဲ ကမြသိတာမဟုတျဘူး ရှငျအနိုငျမကငျြ့ပါနဲ့ ”” ““ အကိုက အနိုငျကငျြ့တယျဆိုပါလား ကိစ်ျစမရှိဘူး မငျးအမွငျမှနျရလာအောငျ ဘယျသူကအနိုငျကငျြ့တယျ ဘယျသူကအလိုတူအလိုပါဖွဈတယျဆိုတာ သိအောငျနို့စို့ပေးအုံးမှပဲ။ ”” ကြောနောကျကို လကျထညျ့ပွီး ဘျောလီခြိတျတှဖွေုတျခလြိုကျတယျ အမယျမယျ သူက လကျကိုကြောနဲ့ဖိထားသေးတယျ
ဘယျရမလဲ သူ့တဈကိုယျလုံးကိုတောငျ ဒီကကောငျက လကျတဈဖကျနဲ့ မ ပွလိုကျမယျ။ ဘျောလီပွုတျသှားတာနဲ့ အရှရေ့ငျကို လှမျးထားတဲ့အကာကို လှပျပဈလိုကျတယျ။ အိုး ခငျမြားတို့မွငျစစေမျးခငျြတယျဗြာ။ တကယျတကယျ လိမေ်ျမျာသီးထိပျမှာ အသီးတံအတှကျ စူစူလေးဖွဈနသေလိုပါပဲ။ သူ့နို့သီးလေးရဲ့ ထိပျမှာလဲ ခပျစူစူလေး ကပျပွီးမို့နတေယျ နို့သီးမဟုတျဘူးနျော နို့သီးကို ကြှနျတျောထပျပွီးလုပျပွမယျ ကွညျ့နေ။ အခုတော့ကောငျမလေးဟာငွိမျနလေရေဲ့ နို့အုံတဈခုကို အသာငုံပွီး စုပျယူလိုကျပါတယျ
တဟငျးဟငျးနဲ့ရှကျလဲရှကျ အရသာလဲတှနေဲ့ အတော့ကို အကွပျရိုတျနပေုံပဲ။ နို့အုံရဲ့ နို့သီးထှကျလာမယျ့ထိပျကို လြှာနဲ့ မနားတမျး ကျောပတျတိုကျပေးလိုကျတယျ။ ခွမှောကှကေ့ောကျနပွေီး ကနျြနို့အုံတဈခုကိုလကျနဲ့အုပျပွီးပှတျနလေရေဲ့။ အရမျးဖီးတကျနပွေီကိုး။ ဒီတဈဖကျနို့အုံကိုစို့ရတာအားရတော့ ဟိုဘကျကိုသှားစို့ရပါတယျ ကောငျးတယျဗြာ။ သူလဲကောငျး ကြှနျတျောလဲကောငျး။ ဖွဈနိုငျရငျ အခမဲ့ နို့စို့ကုမ်ျပဏီတဈခုတောငျ ထောငျလိုကျခငျြတယျ။ ခငျဗြားတို့က ရှယျယာဝငျတှပေေါ့ ကြှနျတျောက ဒိုငျခံစို့မယျ….။
နို့သီးနှဈလုံးဟာ ဖောငျးလာပွီး နို့အုံတှဟောလဲ တငျးမာလာပါတယျ။ နှားမတဈကောငျနို့ပွညျ့လာသလိုပေါ့။ သူကတော့ တဏှာသှေးတှနေဲ့ ပွညျ့ပွီး နို့အုံဖောငျးလာတာပေါ့။ နို့စို့ ခဏရပျပွီး သူ့ကို အခွအေနကွေညျ့လိုကျတယျ။ ကြှနျတျာလညျး အတနျကွာ မလှုပျရှားတော့ အသာမကျြစိဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတယျလေ။ ကြှနျတျောလညျးကွညျ့နမှေနျးသိရော နို့တှကေို လကျနဲ့ပိုကျပွီး ရှကျစနိုးနဲ့ အုပျသှားတယျ။ သွျော….. မိနျးမ….. ။ သူ့မကျြနှာလေးကို ပွနျပွီးဆှဲလှညျ့လိုကျပါတယျ။ ““ ကောငျးလား….. ကောငျးလား….. နို့စို့တာကောငျးလားဟငျ….. ”” ဘာသံမှထှကျမလာဘာဘူး။
““ အေးနရေငျတော့ စကားပွောအောငျလုပျရမှာပဲ ပထမအျောရမယျ နောကျတော့ စကားပွောလာရမယျ နို့စို့တာကောငျးလား မကောငျးလားမေးနတောကို မဖွဘေူး မကောငျးဘူးဆို နောကျမစို့တော့ဘူး။ ”” အဲ့ဒီလို ခပျထနျထနျပွောတော့လညျး မကျြနှာငယျလေးနဲ့ သနားစရာပါပဲ။ ““ ဘာတှလောမေးနမှေနျးမသိဘူး ”” ဟုတျသားပဲ ကြှနျတျော လောသှားတယျ သူ့ခါးက ထဘီကို အသာဖွခေလြိုကျတယျ ပွီးတော့ မခြှတျေးပဲ ထဘီပျေါက စောကျဖုတျကို လကျဝါးနဲ့အုပျပွီးပှတျပေးနရေတယျ ဗွုံးခနဲ ခြှတျခရြငျ ရှကျသှားရော တျောတျောလေးကွာအောငျလဲ ပှတျပေးပွီးရော ခေါငျးလေးဟာ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ထလာပါတော့တယျ။
စပျစပိုငျဒါဝတျလရှေိ့ဟနျမတူဘူး ထဘီကို အသာရှောခလြိုကျပါတယျ။ အိုး လှလိုကျတာဗြာ။ တကယျပါပဲ ခငျဗြားတို့လဲ ဒီလိုမြိုးတှဘေူ့းဖွဈမှာပါ။ ဖာသညျတဈယောကျရဲ့ အဖုတျဟာ ရမကျဇောတှထေနျလာအောငျ နှိုးဆှခငျြ နှိုးဆှနိုငျမယျ .. ဒီလို ပစ်ျစညျးသနျ့သနျ့လေးတှလေိုတော့ စိတျကိုဆှဲဆောငျနိုငျမှာ မဟုတျဖူး။ .. အခုလဲကွညျ့လေ အပြိုစငျတဈယောကျရဲ့အဖုတျကို အနီးကပျမွငျခှငျ့ရတဲ့ ကြှနျတျောတဈယောကျ အသကျရှုမှားသှားတာအပွဈလား။ စောကျဖုတျလေးကို တရှုံ့ရှုံ့နဲ့ ယုယုယယနမျးတော့ ထိတျလနျ့ခွငျး ရှကျကွောကျခွငျးတို့ဟာ သူ့မကျြနှာပျေါမှာ ထငျဟပျလာပါတယျ။
အရိုငျးပကေိုး။ စောကျဖုတျရဲ့ စေးကပျနတေဲ့ နှုတျခမျးသားလေးနှဈလှာကို လူမိနျးမ တဈယောကျရဲ့ စိုရှနျးတဲ့ နှုတျခမျးရဲရဲလေးလို သဘောထားပွီး စုပျနမျးလိုကျပါတယျ။ နဲနဲတော့ညှီတာပေါ့ဗြာ။ ဘယျတတျနိုငျမလဲ။ အပြိုစငျကို လိုးခငျြရငျတော့ ဒီလောကျတော့ ခံနိုငျရမှာပေါ့။ ရခြေိုးခနျးနဲ့ အကအြနမခြိုးနိုငျတဲ့ လူတှဆေိုတော့လညျး ဒီလောကျ အနံ့ရှိတာ အဆိုးမဆိုသာပါဘူး။ တဈခြို့ဆို နာမညျကွီးဆပျပွာတှသေုံးရဲ့နဲ့တောငျ စောကျဖုတျက ပုတျနတေယျ။ အလိုဗြာ ရေးရငျးနဲ့ ဘယျတှလြှေောကျရောကျသှားမှနျးမသိပါဘူး။
အကှဲကွောငျးလေး တဈလြှောကျ လြှာကလေးနဲ့ မဉျြးဆှဲပေးလိုကျမိတယျ။ အခုနက ရှကျနတေဲ့ ကောငျမလေးဟာ ပေါငျကို အတငျးဖွဲပွီး ဖငျကွီးကော့တကျလာပါလရေော ဗြာ။ အခုနက ခွောကျလို့ ကပျစီးစီးဖွဈနတေဲ့ စောကျဖုတျလေးနှဈလှာဟာ အခုတော့ ကြှနျတော့ရဲ့ လမျးပနျးဆကျသှယျရျေါ စီမံကိနျးအရ ကြှနျတော့တံတှျေါတှနေဲ့ ခြှဲပွီး အလှယျတကူ လြှာဟာ အထဲဝငျနိုငျပါတော့တယျ။ အိုးကောငျးလိုကျတာဗြာ လြှာလကာရညျအိုးထဲ လြှာထဲ့လကျြရသလိုပါဘဲ အနံ့ကလညျး တဈမြိုး အရသာကလညျးတဈမြိုး မဆိုးပါဘူး။
လြှာကလေးဟာ ဟိုထိုး ဒီထိုးနဲ့ နောကျဆုံး သူ့ရဲ့ပဈမှတျဖွဈတဲ့ စောကျစကေို့ သှားပှတျတိုကျလိုကျမိပါတယျ။ စောကျစလေ့ေးဟာ ပြော့အိနူးညံနပွေီး အဆီခဲလေးလို အဈနသေဗြာ လြှာဖြားလေးနဲ့ ဟိုထိုးဒီထိုးလုပျလိုကျ ဖိပွီးပှတိဆှဲလိုကျနဲ့ နညျးမြိုစုံသုံးပွီး ဆှပေးလိုကျတာ တဈခါတညျး စောကျစဟေ့ာတောငျလာပါလရေော။ သူရဲ့ စောကျဖုတျဟာပွောငျးလဲမှုတှကေို ခံစားရပွီး အံ့သွနပေုံရတဲ့ ကောငျမလေးဟာ သူ့စောကျဖုတျကို သခြောစှာ ငုံ့ကွညျ့နပေါတယျ။ ဟုတျတယျလေ။
အပြိုစငျမို့ နဲနဲဆှပေးလိုကျတယျဆိုရငျပဲ သှေးကွောထဲက သှေးတှဟော အကျဆဈတှဖွေဈသှားရောပေါ့။ အခုစောကျခေါငျးထဲမှာ ဆိုးသှမျးတဲ့ မွှတေဈကောငျလို အငွိမျမနတေတျတဲ့လြှာနဲ့တှတေ့ော့ ရမကျမီးဟုနျးကနဲ တောကျပွီးသှေးကွောထဲက အကျဆဈတှကေို ပှတျပှတျဆူစပွေီပေါ့။ ခြိုခြိုရဲ့ ပါးစပျကနေ တရှီးရှီးနဲ့ ငရုပျသီးစပျသလို အသံတှထှေကျနပေါတယျ။ ပေါငျတံကွီးဖွဲဟပွီး ပွဲသထကျပွဲပွီး ပနျးနုရောငျ စောကျဖုတျလေးကို အခုဏက စိတျသိပျမပါပမေယျ့ အခုတော့ နှာခေါငျးရော မေးစပေ့ါ စောကျဖုတျထဲမွုပျပွီး လြှာကို အတှငျးခေါငျးထဲရောကျအောငျ အတငျးထိုးသှငျးပွီး လြှာရဲ့ အရသာစုလေးတှနေဲ့ စောကျခေါငျးခြောခြောလေးကို လှညျ့ပွီး ယကျပေးနမေိတယျ ။
ကောငျမလေးဟာ ကြှနျတေျာ့ကိုလကျနဲ့ကိုငျပွီး စောကျဖုတျထဲကို ဖိပေးပွနျပါတယျ။ စောကျခေါငျးလေးဟာလဲ တရှရှနဲ့ လြှာကိုပွနျပွီး ဆုပျနယျပေးနပွေီး စောကျစလေ့ေးဟာ နှုတျခမျး ငုတျတိုလေးတှကွေောငျ့ ဖရုံစတေ့ဈစလေို့ တောငျမတျနပေါတော့တယျ။ ““ အား….. အား….. အမေး….. အငျ့….. အငျ့ ”” ဟုတျပါရဲ့ တတျဆိတျနတေဲ့ညကို ဖောကျထှငျးပွီးတော့ ကောငျမလေးရဲ့ အသံတုနျတုနျလေးဟာ လှိုကျမောစရာပျေါ ထှကျလာပါတယျ။ ပွီးသှားပွီလေ…..။ စောကျခေါငျးထဲက အရညျတှဟော လခေိုနတေဲ့ မီးသတျပိုကျကကလြာသလို….. ပှကျကနဲ ပှကျကနဲ အံကလြာပါတော့တယျ။
ဖငျဟာမွပွေငျကနေ တဈထှာလောကျကော့တကျပွီး ဘေးကမွကျပငျတှကေို ပွတျထှကျသှားအောငျဆုပျကိုငျထားပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ နှုတျခမျးနဲ့ မေးစမှေ့ာလဲ သူ့ရဲ့သုတျရညျတှပေပှေလို့ပေါ့ ပါးစပျထဲဝငျလာတာတှကေိုတော့ မထှေးထုတျပါဘူး။ မြိုခလြိုကျတယျ။ စောကျဖုတျထဲက အရညျတှဟော လရောငျကွညျရောငျတှကွေောငျ့ ငှရေောငျအဆငျးတောကျပွီး ငှရေညျတှလေို စောကျဖုတျမှာ တှဲလောငျးခိုနတေယျဗြာ။ သိပျကွညျ့ကောငျးတာပဲ။ ကငျမရာသာရှိရငျ ဓါတျပုံရိုတျထားတယျ။
အခုတော့ ပကျလကျကလေးငွိမျနတော အသကျကငျးမဲ့နသေလိုပါပဲလား။ ကောငျမလေးကို အသာခွနှေဈခြောငျးက ကိုငျပွီး အခုနက သူဝတျထားတဲ့အဝတျအစားတှေ တငျထားတဲ့သဈမွဈခုံးခုံးကွီးပျေါမှာ ခါးကို တငျလိုကျပါတယျ။ နောကျခွထေောကျတဈခြောငျးကို သဈပငျခွရေငျးမှာ လှမျးတငျပေးလိုကျပါတယျ။ နောကျခွထေောကျတဈခြောငျးကိုတော့မွကျခငျးပျေါမှာပဲ ဖွဲထားလိုကျရတယျ။ ကြှနျတေျာ့လီးကွီးဟာလဲ ကိုကျခဲနလေောကျအောငျ မာတောငျနပေါတယျ။ လီးထဲက အကွောတှဟော အရညျပွားကို ဖောကျထှကျပွီး ခုနျနရေဲ့။
ခရမျးရောငျ လကျနတေဲ့ ဒဈထိပျကို ခြှဲကြိနတေဲ့ စောကျခေါငျးထဲမှာ နှဈပွီး အသာမှပေေးနတေယျ။ ကောငျမလေးက သိရောပေါ့။ လိုးတော့မယျလို့။ အရညျကွညျလေးတှစေို့လာပွနျရော။ တှနျ့လိမျနတေဲ့ စောကျခေါငျးကို အသာလကျနဲ့ဟပွီး လီးဒဈကိုတပွေီ့းတော့ အသာသှငျးလိုကျ ထုတျလိုကျနဲ့ ဆှပေးနပေါတယျ ။ ကောငျးလဲကောငျးတဲ့ အရသာပါပဲ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ အကွောပေါငျးတဈထောငျဆိမျ့သှားအောငျလို့ သူ့ရဲ့ စောကျဖုတျလေးဟာနူးညံ့လှပါတယျ။ သူလဲကြှနျတေျာ့ရဲ့ နူးညံ့တဲ့ဒဈဖြားကွောငျ့ အရသာတှနေ့ပေုံပါပဲ။
စောကျစကေ့လေးဟာ တဆတျဆတျနဲ့ စောကျပတျကလေးဟာ တရှရှနဲ့ ပါးစပျထဲက တဟငျးဟငျးနဲ့ ကောငျမလေးဟာ အငျမတနျ အလိုးခံခငျြနပေါတယျ။ ကြှနျတျောရဲ့ လီးကွီးကို စောကျခေါငျးထဲမှာ သှတျသှငျးထားခငျြနပေုံပဲ။ လီးကိုနဲနဲဖိသှငျးလိုကျပါတယျ အငျ့ကနဲ အသံထှကျလာပါတယျ။ အဲ့ဒီနားမှာ ထုတျလိုကျသှငျးလိုကျလုပျပွီး တရှရှေ့နေဲ့ဝငျလာလိုကျတာ အပြိုစငျမှေးကိုသှားထောကျမိပါလရေော ကောငျမလေးလဲ လီးဝငျတဲ့ တလြှောကျလုံး တကြှတျကြှတျနဲ့ စုပျတသပျသပျနဲ့ပေါ့။
အပြိုစငျမှေးကို အသာဖိလိုကျ ပွနျနှုတျလိုကျ လုပျနတေော့ ကငျြ့သားရသှားပုံပဲ ငွိမျသှားလရေဲ့ ။ ကော့တကျနတေဲ့ ခါးနှဈဖကျကို လကျနဲ့စုံကိုငျပွီး အပြိုစငျမှေးကို မာတောငျနတေဲ့ လီးကွီးနဲ့ ဖိထောကျခလြိုကျတော့ပါတယျ။ ““ ပွှတျ….. ဗွဈ….. ဖောကျ…… ဒုတျ….. အငျ့….. အငျး….. အမေ့….. အား….. သပေါပွီ….. အမရေဲ့…… ”” ဟုတျကဲ့ ဒီလောကျတော့ရှိမှာပေါ့ ခငျဗြားတို့လဲလနျ့မသှားနဲ့အုံး လူသတျနတောမဟုတျဘူး။ ပနျးဆှတျနတော။ ကောငျမလေးရဲ့အသံဟာ တိတျဆိတျခွငျးကိုဓားနဲ့ထိုးလိုကျသလိုပဲ။ စူးရှပွီး ငှကျဆိုးတောငျ လိပျပွာလနျ့သှားနိုငျတယျ။
ကြှနျတျောကတော့ ထနျနပွေီမို့ သိပျမမှုပါဘူး။ ““ ဗွဈ… ဗွှတျ… ပွှတျ… ဒုတျ… အငျ့… အီးဟီး… ဟီးဟီး… ဒုတျ… အား… ဒုတျ… အိုး… အိုး… ဟီး… အငျ့… အငျ့… ဒုတျ… အား ဟငျး… ဟငျး… ဟငျ့… ”” ကောငျမလေးဟာ ကွောကျသှားပုံပဲ… ငိုရှိုတျရငျး အလိုးခံနရေရှာတယျ။ စောကျခေါငျးကဉျြးကဉျြးနုနုလေးဆီမှာ လီးကွီးဟာ ကိုယျ့အိမျကိုယျ့ယာလို သဘောထားပွီး ဝငျခငျြသလိုဝငျ ထှကျခငျြသလိုထှကျ နပေါတယျ။ သှေးတှကေတော့ရဲနတောပဲ ငရုတျသီးထုပျပေါကျသှားသလား အောကျ့မရေ့တယျ။
အတျောကွာကွာလဲလိုးပွီးရော သူ့ရဲ့အပြိုစငျမှေးလေးဟာ လီးရဲ့ပှတျတိုကျမှုဒဏျကွောငျ့ လိပျပွီး ပွတျထှကျသှားတယျ လီးအထုတျမှာ အပွငျကိုပါလာပွီး သှေးတှနေဲ့ရောလို့ ရျောဘာပွားတဈပွားလိုပါပဲ လိပျပွီး စောကျဖုတျမှာ ကပျနတေယျ။ ကောငျမလေးကတော့ ငွိမျသှားပွီး ကောငျးလာတယျထငျပါရဲ့ ကောငျးရမယျလေ။ ဒီအရသာဟာ ဘယျသူမြားတောငျ့ခံနိုငျလို့လဲ။ လီးကသာ မှနျမှနျကွီးဝငျလိုကျထှကျလိုကျနဲ့ အလုပျမြားနတော။ ““ ဟော… ”” ဘာမှကွာလိုကျတယျ မထငျရဘူး။ ကောငျမလေး စောကျဖုတျ အခေါငျးဟာကြှနျတျောလီးကို အတငျးဆှဲဆုတျပွီး မလှတျတမျး ညှဈထားလိုကျပါတယျ။
လီးထိပျမှာတော့ ရနှေေးလို ပူနှေးတဲ့ အရာတှေ လာထိလို့ကောငျမလေးပွီးသှားမှနျး သိရတယျ။ စုပျထားရကျနဲ့ပဲ ရအောငျဆောငျ့ပေးလိုကျတော့ ကြှနျတျောလညျး ကွာကွာမခံနိုငျတော့ဘူး လီးတငျမက တဈကိုယျလုံး တငျးခနဲဖွဈသှားပွီး သုတျရညျတှကေို စောကျခေါငျးထဲကလြှံကအြောငျ သားအိမျကို ပနျးခလြိုကျပါတယျ။ သိပျကောငျးတာပဲဗြာ။ သိပျကောငျးတာပဲ။ အပြိုကိုလိုးရတာ ဘာနဲ့မှ မတူဘူး။ ကောငျမလေးငွိမျကသြှားသလို ကြှနျတျောလညျးသူ့ကို အသာပကျလကျအနအေထားဖွဈအောငျထားပွီး သူ့ဘေးမှာ ဝငျထိုငျလှဲရငျး နို့သီးတှကေိုဆုပျခရြေငျး အမောဖွနေရေပါတယျ။
““ ကမြပွနျရတော့မယျ ဖယျပေးအုံး ”” အရှကျ အကွောကျတို့နဲ့ ရောပွီး တုနျယငျနတေဲ့ အသံနဲ့ ကောငျမလေးက ကြှနျတေျာ့ကို ရှိုကျပွီးပွောပါတယျ။ ““ အိုး ကိုယျပို့ပေးမှာပေါ့ ခြိုလေးရယျ အဝတျအစားလဲ ဖွေးဖွေးထ ကိုယျ့ကိုကိုငျထား။ ”” မတျတပျထအရပျမှာ စောကျဖုတျထဲမှာ အိုငျနတေဲ့ သှေးနဲ့သုတျရညျတှဟော ဝေါကနဲ ကလြာပါရောဗြာ။ ကောငျမလေးပိုလနျ့သှားတယျ။ ““ စိတျခြ ဘာမှမဖွဈစရေဘူး ဒါအပြိုမှေးပေါကျလို့ထှကျတာ ”” သူ့ကိုဘျောလီခြိပျတပျပေး အကငြ်္ီဝတျပေး ထဘီဝတျပေးပွီးတာနဲ့ ပွနျ့ကြဲနတေဲ့ ပစ်ျစညျးတှေ ကောကျပွီး သူ့ချေါရာနောကျကို အသာလိုကျလာပါတယျ။
သူ့ခါးကလေးကိုတော့ လကျတဈဖကျနဲ့ သိုငျးဖကျလို့ပေါ့။ တဖွေးဖွေးနဲ့ မီးရောငျ မှိတျတုပျမှိတျတုပျ လမျးလေးတဈခုထိ ရောကျလာပါတယျ။ အိုဗြာ ကောငျးကငျကွီးဟာ အစအဆုံးမရှိပဲဖွဈနသေလို ဒီတဲလေးဟာလညျး ကှငျးပွငျကယျြ ပနျးစိုကျခငျးကယျြကွီးထဲမှာပါ့ဗြာ။ အဲ့ဒီစိုကျခငျးကယျြကွီးထဲမှာ တဲကလေးက ထီးထီးတညျးဖွဈနတော အိပျမကျကမ်ျဘာထဲ ရောကျနသေလိုပါပဲလား။ ““ မမရေ မမ အောငျဇေ အောငျဇေ အိပျပွီလား ဒျေါလေးကို တံခါးဖှငျ့ပေးပါအုံး ””
““ ဟဲ့ ညီမလေး နောကျကလြှခညျြလား သူကကော ဘယျကလဲ လာလာ မိုးခြုပျလှပွီ မမဖွငျ့ စိတျပူလိုကျရတာ ”” ““ လမျးမှာ လမျးသူရဲ ကလကေခတြှေလေိုကျ နှောကျယှကျလို့ ဒီက အကိုကလိုကျပို့ပေးတာပါ မမရယျ။သူသာမကယျရငျ ကမြဘဝတော့ဒုက်ျခပဲ ”” ကောငျးပါ့ဗြာ တျောတျောလိုကျတဲ့ ခြိုခြို ။ ““ အျော ကြေးဇူးတငျပါတယျရှငျ ကမြညီမလေးက ညပိုငျးအထိ ဇှဲနဲ့ဈေးရောငျးတော့ တနဒေ့ါမြိုးဖွဈမယျထငျသားပဲ ကြေးဇူးပဲရှငျ ဘယျလိုပွောရမှနျးတောငျမသိတော့ဘူး ”” စကားလညျးပွော မကျြလုံးကလဲ ကြှနျတေျာ့ တကိုယျလုံးကို နရောအနှံ့လိုကျကွညျ့နတေယျ သူကလဲသူ့ညီမလို မိနျးမခြောပဲ။
သူ့ညီမထကျတောငျ ဘျောဒီကောငျးသေး နို့ကွီးတှကေ ဘရာဇီယာမပါပဲ အကငြ်္ီအောကျမှာ ကွှားကွှားရှားရှား တငျပါးကွီးတှကေ ကားထှကျနလေရေဲ့ သူ့အရပျကလဲ သူ့ညီမထကျပိုမွငျ့ပါတယျ။ တဈခုတော့ရှိတယျ ခလေးအမထေငျတယျ သူ့ဘေးမှာ ၅နှဈအရှယျ သူ့ရုပျမြိုးနဲ့ ခြာတိတျတဈကောငျ ရပျနတေယျ။ ““ မမ အဈကို့ကို ထမငျးပါအုံး ဆာရော့မယျ ကမြရခြေိုးလိုကျအုံးမယျ ”” ““ ဟုတျသားပဲ မနေ့လေိုကျတာ လာ လာ ဒီမှာထိုငျ ”” ““ နပေါစေ ကြှနျတျောမစားဘူး အခုပွနျမှာ ””
““ မစားရငျ မချေါဘူးနျော အဈကို လမျးမှာတော့ ခြိုခြို ခြိုခြိုနဲ့ အခုသူမြားကြှေးတာကြ မစားရငျ နောကျလမျးမှာတှတေ့ောငျ ရှောငျသှားမှာ ”” ““ ကဲ ကဲ စားပါမယျဗြာ…. အျော…. ဒါနဲ့ အဈမကွီး… ”” ““ ရှငျ… ပွောပါ ”” ““ ထမငျးမြားမြား ထညျ့ခဲ့ပါ… ”” ကြှနျတျောတို့ စားရငျးသောကျရငျး စကားပွောရငျးနဲ့ အခြိနျဘယျလောကျကွာသှားတယျ မသိဘူး။ ဟိုးအဝေးဆီက လှငျ့လာတဲ့ (၁၁)နာရီသံခြောငျးခေါကျသံကွောငျ့ သုံးယောကျသား မကျြလုံးပွူးသှားပါတယျ။ ““ ဟဲ့တော့… (၁၁)နာရီထိုးပွီ ဒုက်ျခပဲ မမရေ ဘယျလိုလုပျမလဲ ””
““ ဒီမှာပဲအိပျပေါ့ ဒီအခြိနျ အပွငျထှကျရငျတော့ အဖမျးခံရမှာပဲ ”” တိုတိုပွောရရငျ ကြှနျတျောကို သူတို့ညီမနှဈယောကျဘေးက အခနျးမှာ နရောခပြေးတယျ။ ကွမျးကမာတော့ တျောတျောနဲ့ အိပျမပြျောနိုငျဘူး။ ဟိုလိမျ့ဒီလိမျ့နဲ့ ည(၁)နာရီထိုးပါရော မှေးကနဲ အိပျပြျောသှားတဲ့ အခိုကျနူးညံ့ပြော့အိတဲ့ အထိအတှကွေ့ောငျ့ ကြှနျတျောလညျးလနျ့နိုးသှားပွီး…။ ““ ဟငျ မမ ပါလား ”” ““ ဟုတျတယျ မောငျလေးရယျ မမ မနနေိုငျတော့လို့ မောငျလေးဆီလာခဲ့တာပါ။ မမကိုတော့ အထငျမသေးလိုကျပါနဲ့နျော ””
မသေးပါဘူးခငျဗြာ အဖွပေေးတဲ့ အနနေဲ့ ပွညျ့ဖွိုးတဲ့ နှုတျခမျးလှာလေးကို ငုံ့ပွီး စုပျယူလိုကျတယျ အားပါး ဒီမိနျးမက သဘာပဲ ကြှနျတျောအာခေါငျထဲကို လြှာထညျ့ပွီးကလိပါလရေော လကျတဈဖကျကလဲ အကငြ်္ီကွညျသီးတှေ တဈလုံးခငျြးဖွုတျပွီး ရငျဘတျကို ပှတျလိုကျ ရငျဘတျမှေးတှနေဲ့ ကစားလိုကျနဲ့ ဖီးလျတှပေေး နတေယျ။ကြှနျတျောလဲ သူ့အကငြ်္ီကိုဟပွီး ထှားအိနတေဲ့ နို့အုံတှကေို အသာဆုပျနယျပေးလိုကျပါတယျ။နို့သီးတှဟော လကျသနျး တဈဆဈလောကျရှိမလား မသိ ကောငျးလိုကျတာ တရှရှေ့နေဲ့သူ့လကျတှဟော ကြှနျတေျာ့လီးဆီကို ရှဆေ့ငျးလာပါရော။
ခေါငျးထောငျခငျြခငျြဖွဈနတေဲ့လခြောငျးကို လကျနဲ့ ဆုပျနယျပွီး အသာဂှငျးတိုကျပေးနပေါတယျ။ အားကမြခံ စောကျဖုတျမို့မို့ကွီးကို အသာဆုပျကိုငျပွီး ပှတျပေးသလို လကျခြောငျးတှကေလဲ စောကျခေါငျးထဲဝငျပါလရေော ကလေးတဈယောကျ အမသောဆိုတယျ။သိပျမကယျြပါဘူး။ အနတေျောပဲ အရညျတှကေလဲ ရှဲလို့ ရမကျပွငျးတဲ့မိနျးမပဲ။နှုတျခမျးခငျြးခှာထိုငျလိုကျပွီးတော့ ကြှနျတေျာ့ပုဆိုးကို ခြှတျခလြိုကျပါတယျ။ လီးကွီးဟာ မွှတေဈကောငျလို ခေါငျးတလှုပျလှုပျနဲ့။ သူ့ခေါငျးလေးငုံ့ပွီးလီးဒဈကို ငုံလိုကျပါတယျ။
““ အိုး မမ မမ ကောငျးလိုကျတာဗြာ ကောငျးလိုကျတာ မမ ဟုတျတယျလြှာနဲ့ ထိုးပေး အား မမရယျ ”” ကြှနျတျောရဲ့ အသံတိုးတိုးလေးဟာ မမကိုပိုမို လှုပျရှားစပေါတယျ။ ”” ပွောရအုံးမယျ သူ့နာမညျက ခြိုရီတဲ့ဗြာ။ ညီမနှဈယောကျလုံး ကြှနျတေျာ့အပျေါ ခြိုကွပါပတေယျ။ သာဓု သာဓု သာဓု…. ။ လီးကို ကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြနဲ့ စုပျယူလိုကျတာ တဈခါထဲ လီးထိပျက လရညျတှဟော ပိုကျနဲ့ကသြလို တဝေါဝေါ ဆငျးကလြာပါရော သူလဲ ရငေတျတဲ့လူလို တကြိုကျကြိုကျနဲ့ မွိုခလြိုကျတယျလေ။
လီးကွီးဟာ သမေသှားပဲ ဆကျတောငျနတေုနျးပဲ။ လီးကွီးဟာသမေသှားပဲဆကျတောငျနတေုနျးပဲ မမဟာ သူ့ထဘီကိုကှငျးလုံးခြှတျခလြိုကျပွီး တောငျနဆေဲဖွဈတဲ့လီးပျေါ ခှထိုငျရငျး စောကျခေါငျးထဲကိုစိုကျသှငျးလိုကျပါတယျ။ ““ ဗွဈ ဗွဈ ဗွဈ ဒုတျ အငျ့ ”” လီးဟာ သိပျမကပျြပမေယျ့ သိပျလဲမခြောငျလှတဲ့ စောကျခေါငျးထဲ အခကျအခဲမရှိဝငျသှားပမေဲ့ ရှညျတဲ့လီးမို့ သားအါမျကို သှးထောကျမိပါတယျ။ ခြိုရီတဈယောကျ အငျ့ကနဲခါဆငျးသှားပါလရေော။ ဒါပမေယျ့ အရငျက အကငျြ့ရှိပုံရတယျ မနားပဲ အသာကိုယျကိုကွှလိုကျ နှိမျ့လိုကျနဲ့ ဆောငျ့နပေါရော ။
““ မမ မမ ကောငျးလိုကျတာ မမရယျ သိပျကောငျးတယျ မမကို ခဈြမိသှားပွီ နာနာဆောငျ့လေ မမ ဘာလဲ သားအိမျနာမှာ စိုးလို့လား ကြှနျတျောရဲ့ သှေးထိုးပငျ့ကျော စကားတှကွေောငျ့ ခြိုရီဟာ ကြှနျတေျာ့ရငျဘတျကိုလကျထောကျအားယူရငျး နို့ကွီးတှလှေုပျပွီး ပွုတျကတြော့မတတျ အားရပါးရ ဆောငျ့ပေးပါတယျ။ ပါးစပျကလဲ တအငျးအငျးနဲ့ ခဏခငျြးအတှငျးမှာပဲ နှဈယောကျလုံး ခြှေးတှရှေဲသှားပါတယျ။ သူကလဲဗြာ အရညျတှကေပြဲကနြိုငျတယျ။ ကြှနျတေျာ့လမှေးတှေ စိုရှဲပွီး ကွမျးပွငျပျေါမှာလညျး အိုငျနပွေီ။
စောကျခေါငျးက မခြျောလို့သာပေါ့။ တဖွေးဖွေးနဲ့ နှုတျခမျးခငျြးစုပျယူသလို နို့တှနေဲ့ ရငျဘတျကို ဖိကပျထားပါတယျ။ လီးဟာသားအိမျကိုဒုတျကနဲဒုတျကနဲ ဆောငျ့မိသလို သူ့နှုတျကလဲ တအငျးအငျးနဲ့ မောသံကွီးထှကျနပေါတယျ။ စောကျခေါငျးဟာ လီးကိုရဈထားပွီး လီးဒဈကအသားနုလေးတှဟော သားအိမျမှာ သှားဆာငျ့တာကို တိုကျခငျြးပဈ ဒုံးပြံတီထှငျတဲ့ သိပ်ျပံပညာရှငျတဈယောကျက သူ့ဒုံးပြံပဈမှတျကိုထိရငျဖွဈမတဲ့ပီတိထကျ ကြှနျတျောဖွဈတဲ့ ပီတိကပိုမှာပါ။ မကွာပါဘူး (၁၅မိနဈကြျောပါတယျ) ခြိုရီဟာ တအငျးအငျးနဲ့ စောကျဖုတျထဲက အရညျတှပေနျးခလြိုကျပွီး ကြှနျတျောကို ခှဖကျပွီး တဈဖကျကိုလှိမျ့ခလြိုကျပါတယျ။
ကြှနျတျောအပျေါကိုရောကျသှားတော့တာပေါ့။ အခုတော့ကြှနျတျောဆောငျ့ရမညျ့ အလှညျ့ပဲ။ မိနျးမတို့ရဲ့ စိတျက အတျောဆနျးကယျြသားဗြ။ အရုပျလိုပဲ ကိုယျကလိုကျရငျသူပွေး ကိုယျပွေးရငျသူလိုကျသကိုး။အခုပဲကွညျ့လေ မမြှျောလငျ့ပဲ မုတျဆိတျပြားမှာ ပြားရောပိတုနျးရော စှဲတာ။ ဒူးကှေးပေါငျကားပွီး ဖွဲပေးထားတဲ့ ခြိုရီစောကျဖုတျထဲကို ကြှနျတေျာ့လီးအဆုံးအထိနှဈသှငျးလိုကျပါတယျ။ ““ အငျး ကောငျးလိုကျတာ မောငျလေးရယျ သိပျကောငျးတာပဲ ”” ပွီးတော့လီးကို ဒဈမွုပျရုံလေးခနျြပွီး ပွနျထုတျလိုကျပါတယျ။
အံတဈခကွကြှိတလြိုကပြှီး စကဒဒြုံးကညွတြဈလုံးလို အားနဲ့ဆောငြံလိုကတြယြ။ ခွိုရီရဲ့ သားအိမကြို ဒုတကြနဲ ဆောငြ့ပှီး ခွိုရီတဈယောကြ ကုနြးတတသြှားပါတယြ။ စောကခြေါငြးထဲကလဲ ပှဈနတေဲ့ အရညတြှပှကေကြနဲ အံကလွာပါတယြ။ ဒီလို အခကွနြှဈဆယလြောကလြဲ ဆောငြ့ပှီးရော ခွိုရီစောကခြေါငြးထဲကရော ကွှနတြော့လြီးပါ ပူလာပါတော့တယြ။ ဒီတော့ ခပမြှနမြှနလြေးပှီးအောငြ မှနမြှနပြဲဆောငြ့ပေးလိုကတြာ ခွိုရီစောကဖြုတအြတှငြးသားတှဟော ကွှနတြော့လြီးကို သတျြတဝါတဈကောငလြိုစုပခြလွိုကတြော့။
အမလေးဗြာ တဈကိုယျလုံးမှာရှိတဲ့ သှေးတှဟော လီးထဲက ပနျးထှကျလာသလား အောကျ့မရေ့တယျ။ သုတျရညျတှတေလဟော ခြိုရီရဲ့ သားအိမျကို အားရပါးရ ပနျးခလြိုကျပါတယျခြိုရီလဲအငျမတနျအားရတဲ့ပုံစံနဲ့ ဖငျကွီးတှကေော့တကျပွီး ကြှနျတေျာ့လီးကို သားအိမျနဲ့ ညှပျနိုငျသမြှ ညှပျထားပါတော့တယျ။ မောမောနဲ့ ခြိုရီပျေါ ထပျကညြပီး မှိနျးနတေဲ့ ကြှနျတေျာ့ကို ခြိုရီက ပှတျသပျပေးရငျး မကျြနှာ တဈပွငျလုံးနရောလပျမကနျြရအောငျ လြှောကျနမျးနပေါတယျ။ ““ မောငျလေး အိမျထောငျနဲ့လား ””
““ ဟငျ့အငျး လူပွို လူပြိုမဟုတျဘူးနျော ရရဈနဲ့ ပွိုတဲ့ လူပွို ”” ““ မငျးလီးကွီးက သိပျကောငျးတာပဲကှယျ မမဖွငျ့ အခုထကျထိတောငျ စောကျခေါငျးထဲမှာ အရသာတှနေ့တေုံးပဲ ”” ““ မမယောကျြား ရော ”” ““ သူကဆုံးသှားပွီလေ မမလဲသူဆုံးကတဲက ဘယျယောကျြားနဲ့မှ မအိပျရ အခှငျ့အရေးကလဲမရ ယောကျြားလဲမတှတေ့ော့ မမရဲ့စိတျတှကေို အတငျးခြုပျထားရတယျ အခေါငျးထဲမှာလညျးမခံနိုငျအောငျယားလှနျးလို့ ငိုခဲ့ရတဲ့ ညတှလေညျး မနညျးဘူး ကှယျ အခုမောငျလေးနဲ့ အားရပါးရ လုပျကိုငျရတော့မှ မမစိတျတှငွေိမျရတော့တယျ မငျးနောကျဆိုနတေို့ငျးလာပေးနျော မောငျလေး ””
““ ရှငျတျောတျော ယုတျမာပါလား ဟငျ ညီမကိုရအောငျခြိုငျပွီးတော့ မမကိုပါယူတယျ ရှငျလူယုတျမာ ဟငျး ဟငျး ဟငျး ”” ဟိုကျ … ဘယျတုနျးက ခြိုခြို နိုးပွီး အနားရောကျလာတယျမသိဘူး … ကှိုငျပဲ။ .. ““ ဟဲ့ ညီမလေးနအေုံး ဒီကစ်ျစဟာ သူဘာမှလုပျတာမဟုတျဘူး မမစလို့ဖွဈရတာ မမလဲမနနေိုငျလှနျးလို့ သူကိုကပျရတာပါကှယျ။ နငျသူနဲ့ ဖွဈခဲ့တယျတာလဲ သိပွီးသား နငျ့ထဘီမှာသှေးတှပေပွေီး နငျတို့နှဈယောကျအတူ လမျးလြှောကျလာကတဲက နငျတို့ ကိစ်ျစပွီးခဲ့မှနျးသိတယျ။
ဒါကွောငျ့လဲ ငါသူ့ကိုစညျးရုံးရဲတာပေါ့ ”” ““ ဟငျ မမသိရကျနဲ့လုပျတယျ ဟုတျလား ရကျစကျလိုကျတာ မမရယျ မမလငျယူပွီးတာတောငျ သူမြားရဲ့ ”” ““ ဟဲ့ မိနျးမတှရေဲ့ သဘောနဲ့ ခံစားခကျြကို နငျကွီးမှသိလာမယျ ညီမလေးရယျ ငါမနနေိုငျလှနျးလို့ သူ့ကိုလုပျခိုငျးရတာပါ ”” ““ မနနေိုငျရငျ ခွံအလုပျသမား ထှနျးတငျနဲ့ အိပျပါလား အခုတော့ ခြောခြောနုနုလှလှလေးကိုမှ အရယူရသလား ”” ““ ပွောပါ ညီမရယျ ပွောပါ မမရဲ့အပွဈပါပဲ ”” ““ လကျခုပျဆိုတာ နှဈဖကျတီးမှမွညျတာပါ ””
““ သူနဲ့ မဆိုငျပါဘူး ကှယျ ”” ““ ဆိုငျတယျ ဆိုငျတယျ ကမြကို အပြိုရညျပကျြအောငျလုပျပွီးတော့ ရကျတောငျမပွောငျးမခွားပဲ အဈမရငျးနဲ့ စိတျရှိလကျရှိလုပျနိုငျတဲ့လူကို ကမြဘယျလိုလုပျခှငျ့လှတျနိုငျရမလဲ ”” ““ ကဲ ညီမရယျ မမတို့နှဈယောကျလုံး သူနဲ့အညီအမြှခဈြကွတာပေါ့ကှယျ ”” ““ ဟငျ့အငျး မရဘူး မမကလငျယူဘူးတော့ သူ့ကိုပိုဆှဲဆောငျနိုငျမှာပေါ့ သူ မမကိုခဈြမှာပဲပေါ့ ”” ““ မဟုတျပါဘူး ခြိုခြိုရယျ မငျးလေး သဝနျမတိုစပျးပါနဲ့ ကိုယျမငျးကိုပိုခဈြပါတယျကှာ။
မမကိုလဲ သနားမိတာပေါ့ သူလဲလူသားပဲ ဆန်ျဒလေးတှတေော့ရှိမှာပေါ့ နဲနဲကိုယျခငျြးစာပါအုံး အခဈြကလေးရယျ ”” ကြှနျတျောတို့ အခွအေတငျပွောနတေုံး စိုရှဲပွီးပွောငျလကျနတေဲ့ ကြှနျတေျာ့လီးကွီးကို တလှညျ့ ဖွူပွဈပွဈ အရညျတှေ ယီးလေးခိုနတေဲ့ ခြိုရီစောကျဖုတျကို တလှညျ့ ခြိုခြိုတဈယောကျ မကျြစိကစားနပေါတယျ။ ဒါကိုသတိထားမိတဲ့ ကြှနျတျောဟာ လီးကို အတငျးတောငျလာအောငျအားစိုကျပွီး မသိမသာ ထောငျပေးနမေိတယျ။ ““ သူကလဲ အမြိုးမြိုး အခုနကပဲ ခြိုခြိုကို ခဈြပါတယျလေး ဘာလေးနဲ့ အခုနံရံတဈဖကျခွားရုံနဲ့ တခွားတဈယောကျကိုခဈြတဲ့ သူကို ဘယျလို ယုံရမှာလဲ ””
““ အိုး ယုံရမှာပေါ့ကှာ။ မငျးတို့ညီအဈမနှဈယောကျလုံးကို ပိုငျရမှတော့ ဘယျသူနဲ့သှားပွီး ရှုပျနနေိုငျတော့မလဲ မငျးကလဲခဈြဖို့ကောငျး မမကလဲကွိတျစရာကွီးဆိုတော့ ကိုယျမငျးတို့နားပဲကပျနမှောပါကှာ ”” ““ ကဲ ညီမလေးလာ မမဘေးမှာလာထိုငျ ”” ကွမျးပွငျပျေါမှာ အိကနဲ ထိုငျခလြိုကျတဲ့ ခြိုခြိုကို ကြှနျတျောက ထဘီခြှတျလိုကျသလိုသူ့အဈမကလဲ အကငြ်္ီကို ခြော့မော့ပွီး ခြှတျခနြပေါတယျ။ ပထမတော့ ရှကျသလိုလုပျနပေမေဲ့ သူ့အဈမက အမြိုးမြိုးနားခပြွီး ကိုယျတုံးလုံးလုပျလိုကျပါတယျ။
မီးရောငျအောကျမှာ စံခြိနျမှီ ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျနဲ့ဒီမိနျးကလေးနှဈယောကျဟာ ရှေးခတျေရောမ ကြောကျရုပျလေးတှလေို အငျမတနျလှပနပေါတယျ။ ကြှနျတျောကို ကြှနျတျောတောငျ နတျသားတဈပါးလို အထငျရောကျမိပါရဲ့။ ဟုတျတယျလေ အခုလဲ နတျစညျးစိမျကို ခံစားနရေတယျမဟုတျလား။ အမယျမယျ အကွီးမက ရဲတငျးသလောကျ အငယျမက ရှကျနသေဗြာ။ ပေါငျလေးကိုလိမျပွီး စောကျဖုတျလေးကို ဖှကျထားတယျ။ ဒါကိုက ခဈြစရာတဈမြိုးပဲ။
““ ညီမလေး ပေါငျကိုစိမထားနဲ့ကှယျ ဘာလဲရှကျလို့လား မရှကျပါနဲ့ ညီမလေးရယျ ညီမလေးက ကံကောငျးတယျလို့မှတျထား။ အဈမကိုယျတိုငျက ညီမလေးကိုလကျတှေ့ လူ့ဘဝရဲ့အရသာကို သငျပေးတယျဆိုတာ အငျမတနျဖွဈနိုငျခဲတဲ့ကိစ်ျစပဲ။ အခု မမက ညီမကို ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ ယောကျြားကိုကွိုးကိုငျနိုငျတဲ့နညျးတှေ သငျပေးမယျနျော ရှကျမနနေဲ့ ”” ပွောပွောဆိုဆိုနဲ့ သူ့ညီမရဲ့ နားရှကျလေးတှကေို လြှာဖြားလေးနဲ့ တို့ပွီးနှုတျခမျးထဲ ငုံပွီး စုပျယူနပေါတယျ။
ကောငမြလေးခမွာ ကှကသြီးတဖှနြးဖှနြးထပှီး သူ့အဈမရဲ့ နို့တှကေို ကိုငမြိကိုငရြှ ဆုပထြားပါတယြ။ နားရှကတြှကနေေ တရှရှေ့နေဲ့ ခွိုခွိုရဲ့နှုတခြမြးစုံကို ငှငငြှငသြာသာငုံပှီး စုပယြူနပှနေပြါတယြ။ ကွှနတြောလြညြး အငှိမမြနတေော့ပါဘူး။ လုံးဝိုငြးကှီးမားလှတဲ့ ခွိုရီရဲ့ နို့တဈလုံးကို လကနြဲ့စုံကိုငပြှီး နို့သီးတှကေို ငုံပှီးစုပယြူပေးနတယြေ။ အခုနက အရှိနမြသသေေးတဲ့ နို့အုံဟာ ပှနပြှီးတငြးမာလာပှနရြော။ နို့အုံတဈခုလုံး ဖနတြုံးကှီးလို တလကလြကဖြှဈအောငြ လွှာနဲ့ လွှောကယြကပြေးနတယြေ။
သူလဲအရသာတှပေုံ့ပဲ။ ဒါပမေယျ့ သူ့အရသာတှကေို သူ့ညီမကိုလှဲပေးလိုကျဟနျတူတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ သူ့နှုတျခမျးဟာ ခြိုခြို လညျပငျးတဈလြှောကျတရှရှနဲ့ ပငျ့ကူတဈကောငျ လမျးလြှောကျသလို လြှောကျသှားနပေါတယျ။ လြှာကလဲ တို့လိုကျထိလိုကျနဲ့မို့ ခြိုခြိုတဈယောကျ တဟငျးဟငျးနဲ့ တှနျ့လိမျနပေါတယျ။ သူ့ညီမနို့တှကေို ခြိုရီဟာ ငွငျငွငျသာသာနဲ့ နယျပေးနပေါတယျ။ တကယျ့ကို ယုယုယယနဲ့ ခငျဗြာ။ ကွှကေမြယျမြားထငျနသေလားမသိ။တရှရှေ့နေဲ့ သူ့ညီမရငျဘတျကို လြှာနဲ့လြှောကျယကျပေးနတေယျ။
ရငျဘတျတဈခုလုံးမှာလဲ အနီရောငျကှကျတှေ ထငျနအေောငျပါပဲ။ ပါးစပျနဲ့စုပျပွီး ယကျပေးနတေယျ။ ပတ်ျတမွားတှရေငျဘတျပျေါမှာ တငျထားသလားပဲ။ ခြိုရီဟာဒီပညာတှေ အတျောလိုကျစားဟနျတူပါရဲ့ ခြိုခြိုကို ပညာကုနျသုံးပွီး ထလာအောငျ ရှလာအောငျ ကွှလာအောငျ လုပျပေးနပေါတယျ။ ဖှဖှလေးနမျးရငျးနဲ့ ခြိုခြိုစောကျဖုတျဆီကို ခရီးဆနျ့နပေါတယျ။ စောကျမှေးနုနုလေးတှကေို လနေဲ့မှုတျပေးရငျး ယုယကွငျနာဟနျနဲ့ ကွညျ့နပေါတယျ။ ပွီးတော့ ဆီးခုံပျေါက အပွငျ နှုတျခမျးကွီးနှဈခုဆုံတဲ့ စောကျဖုတျခြိုငျ့လေးကို ငုံပွီး စုပျယူနမေိတယျ။
ကြှနျတျောကရော ကြှနျတျောလဲအငွိမျမနပေါဘူး။ ခြိုရီနို့တှကေို အားရအောငျစုပျပွီး လေးဘကျထောငျပေါငျကားထားတဲ့ခြိုရီရဲ့ ဗိုကျအောကျခေါငျးသှငျးပွီး စောကျဖုတျနဲ့ တညျ့တညျ့နရောယူလိုကျပါတယျ။လုံးကဈြတငျးမာနတေဲ့ တငျပါးကွီးကို အသာဆှဲနှိမျ့ရငျး စောကျဖုတျကို မကျြနှာပျေါရောကျအောငျ ဖိခလြိုကျပါတယျ။ ပေါငျကားထားလို့ စောကျဖုတျဟာ ပွဲနပွေီး အတှငျး နှုတျခမျးဟာ နှငျးဆီတဈပှငျ့လို နီညိုရောငျ သနျးပွီးပှငျ့ဖတျတှလေို ခှလေိပျနလေရေဲ့။
ခြိုရီလဲ ခြိုခြိုစောကျဖုတျထဲက တရှရှေ့နေဲ့ လြှာကလေး သှငျးရငျး စောကျစကေ့လေးကို လြှာဖြားလေးနဲ့ မထိတထိ ကလိပေးနပေါတယျ။ ခြိုခြိုဟာ ပွငျးပွတဲ့ ဝဒေနာကွောငျ့ တှနျ့လိမျပွီး ခြှေးဆီးတှကေလြာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့သူ့အဈမကလဲ ညီမလေးကို စတေနာအပွညျ့နဲ့ စောကျဖုတျနှုတျခမျးသားတှကေို လကျမနဲ့အသာဖွဲရငျး စောကျဖုတျထဲ နဈသထကျနဈအောငျ မကျြနှာကို ထိုးသှငျးနပေါတယျ။ ““ မမ မမ အငျးဟငျး ဟငျး ဟငျး ခြိုခြို မနတေတျတော့ဘူး မမရဲ့ ”” ဟုတျပါတယျ ခြိုခြိုမနနေိုငျပါဘူး
ခြိုခြိုမနနေိုငျသလို ခြိုရီလဲမနနေိုငျပါဘူး သူရဲ့ အဆီတှပွေညျ့ပွီးဖောငျးတငျးနတေဲ့ စောကျဖုတျမှာ ကြှနျတျောရဲ့ လြှာကွီးထဲ့ပွီး တပွတျပွတျမွညျအောငျ ယကျပေးနမေိတယ။ စောကျစကေ့လေးဟာ သူတကာထကျကွီးတာမို့ ထငျထငျရှားရှား သိနိုငျပွီး နှုတျခမျးနှဈလှာကွားမှာညှပျပွီး လြှာနဲ့ အသာပှတျပေးတော့ ခြိုရီခမြာ ဖငျကွီးတှကေို နှိမျ့လိုကျ မွငျ့လိုကျနဲ့ အတျောကွီး အရသာတှနေ့တေယျခငျဗြာ။ စောကျခေါငျးထဲမှာ လြှာကွီးကို အသာထညျ့ပွီး မှယေကျပေးနမေိတယျ။
စောကျခေါငျးရဲ့ အသားလေးတှေ နူးညံ့လိုကျလခွေငျး တကယျ့ကို ဝါဂှမျးကလေးလိုပြော့အိပွီး နှေးနတေယျ။ သူ့ရဲ့ နှုတျခမျးသားခှလေိပျကလေးတှကေို ငုံပွီး ယုယုယယ စုပျထားတော့ အားရလှနျးလို့လား မသိဘူး။ ““ ဘူ ”” ကနဲ လတှေပေနျးထှကျလာပါတယျ။ စောကျခေါငျးထဲ ကနဲနဲကလြာတဲ့ အရညျတှကေို လကျနဲ့တို့ပွီး ဖငျပေါကျဝကို အသာထိုးတဲ့လိုကျပါတယျ။ ပွီးတော့ လကျညှိုးကို သှငျးလိုကျထုတျလုပျပေးနတေော့ ခြိုရီခမြာ အရသာအတှကွေီ့းတှပွေီ့း ကြှနျတေျာ့ပါးစပျပျေါ စောကျဖုတျကွီးကိုဖိကပျထားပါတယျ။
အဲ့ဒီအခြိနျမှာပဲ ခြိုခြိုတဈယောကျ အသကျနှုတျခံရသလို ဝူးဝူးဝါးဝါး အျောရငျး စောကျဖုတျထဲက အရညျတှေ စီးကလြာပါတော့တယျ။ ခြိုရီလဲ လကျလှတျမခံပဲထှကျသမြှဟာတှကေို ကနျထရိုကျယူသလို လောဘတကွီးနဲ့ ယကျမွိုခလြိုကျပါတော့တယျ။ ခြိုခြိုကတော့ ကောငျးလှနျးတဲ့အရသာကိုပကျလကျကလေးငွိမျခံပွီး မှိနျးနလေရေဲ့။ ရှေးမနှောငျးမှာပဲ ခြိုရီလဲ ကြှဲမတဈကောငျသေးပေါကျသလို စောကျခေါငျးထဲက အရညျတှေ ပါးစပျနဲ့အပွညျ့ ဝေါခနဲသှနျခရြငျး အိပျယာပျေါ လဲကသြှားပါတော့တယျ။
ခဏနားပွီး ခြိုရီဟာ ကြှနျတေျာ့လီးကို လကျဖွငျ့ကိုငျပွီး ပါးစပျမှာတရေ့ငျး စုပျလိုကျယကျလိုကျ လြှာနဲ့ကလိလိုကျ ခေါငျးကို ရှတေို့း နောကျငငျနဲ့ ဂှငျးတိုကျပေးနတေဲ့ ပုံစံမြိုးစုံ ကလိပေးနလေိုကျတော့ ဘသားခြောလဲ ရဟန်ျတာမှ မဟုတျတာ ငေါကျခနဲ ထလာပါရော။ ညီအဈမနှဈယောကျကို ရှေးသလိုလိုနဲ့ တယမျးယမျးရယျ။ သံခြောငျးကွီးလို တငျးမာနတေဲ့ လီးကို ပါးစပျထဲမှာ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျငုံရငျး မွှငျးပွီး ညှဈနလေရေဲ့။ ““ အိုး မမရယျ ကောငျးလိုကျတာ အငျး ကြှတျ ကြှတျ ကြှတျ ကြှတျ ကြှတျ အိုး အား အား အား ယား ”” ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ဝဒေနာကို ခငျဗြားတို့တှရေ့ငျ သနားသှားမယျ။
လူးလိမျ့ပွီး အံကွိတျလိုကျ၊ လကျသီးဆုပျလိုကျနဲ့ အပွငျးအထနျ ဝဒေနာခံစားနရေတာကိုး။ သူမရဲ့ ခေါငျးကို ဆံပငျအရငျးကကိုငျပွီး လီးနဲ့ အတငျးဆောငျ့နမေိတယျ။ ““ မမ….. မမ….. အိုး….. အား….. ပွီးတော့မယျ။ ပွီးတော့မယျ….. ပွီးပွီ….. ပွီးပွီ….. အား….. ”” ရစေုပျစကျနဲ့ စုပျတငျလိုကျသလို လီးထဲက တရှိနျထိုး ထှကျလာတဲ့ သုတျရညျတှဟော ခြိုရီရဲ့ အာခေါငျထဲကို ဝုနျးဆိုပနျးထှကျပွီး မြိုခစြရာမလိုပဲ လညျခြောငျးကနတေဆငျ့ ဝမျးထဲထိ ရောကျသှားပါတယျ။
(၁၅)မိနဈလောကျ မှိနျးပွီး သူ့ညီမခြိုခြိုခွထေောကျ နှဈခြောငျးကို ဆှဲမလိုကျပွီး မတျတပျအနအေထားနဲ့ ဖွဲပွီးကိုငျထားပါတယျ။ ခြိုခြိုရဲ့ ဖငျဟာ ကွမျးနဲ့လှတျပွီး လထေဲမွောကျနတောပေါ့။ ခြိုခြိုရဲ့ ပေါငျကွားထဲ အသာဝငျပွီးပွနျပွီးတောငျမတျစပွုနတေဲ့ ငပဲနဲ့ စောကျဖုတျအကှဲကွောငျးလေးတဈလြှောကျ လိုကျပှတျပေးနတေော့ ခြိုခြိုဟာ တဟငျးဟငျးနဲ့ အခကျြပေးလာပါတယျ။ ခါးကဉျြးကဉျြးလေးကို စုံကိုငျပွီး ဟနတေဲ့ စောကျခေါငျးဝ ဒဈတလေို့ကျပါတယျ။
အသကျအောငျ့ပွီး ဆောငျ့ခလြိုကျပါတယျ လီးဟာ တဗွဈဗွဈနဲ့ထဈထဈဝငျသှားပွီး ဒုတျကနဲ အသံထှကျလာပွီး ခြိုခြိုလဲ တအားအားနဲ့ ငွီးနပေါတော့တယျ။ အခြိနျဆှဲမနတေော့ဘူး။ တရမျးရမျးဖွဈနတေဲ့ ခါးကိုလကျနဲ့ငွိမျအောငျ စုံကိုငျရငျး မညှာတမျးဆောငျ့လိုးပေးနမေိတယျ။ ခြိုခြိုလဲကွညျ့ရတာ အားရပုံပဲ ကိုငျထားတဲ့ခွကေငျြးဝတျတှကေို ပိုပွဲအောငျဆုပျကိုငျပွီးပေါငျကို ထပျဖွဲလိုကျသလို ပိုပွီးလညျး မွငျ့ပေးလိုကျပါတယျ။ ကြှနျတျောဟာ စိတျရှိသလို မွနျမွနျတဈမြိုး နှေးနှေး တဈဖုံ အားရပါး ဆောငျ့နမေိတယျ။
စောကျခေါငျးထဲမှာ လီးကို အဆုံးထိထညျ့ပွီး လျောရီကားတှေ ဂေါကျကွီးနဲ့ စကျနှိုးသလို မှပေေးလိုကျတော့ ငယျသံပါအောငျ အျောပါလရေော။ အခုနက ရခဲ့တဲ့ ဒဏျရာတှလေဲ ပွနျပေါကျပွဲပွီး သှေးတှကေလြာပွနျပါတယျ။ စောကျဖုတျတပွငျလုံးနဲ့ ကြှနျတေျာ့လီးတဈခုလုံး နီရဲပွီးဆေးဆိုးထားသလိုပါပဲလား။ ကြှနျတေျာ့စိတျထငျ အခကျြ (၁၀၀- ၁၂၅)လောကျလဲ ဆောငျ့ပွီးရော ခြိုခြိုစောကျခေါငျးက သှေးတှနေဲ့ ရောနတေဲ့ အရညျတှတေစိမျ့စိမျ့ ဆငျးလာပါတော့တယျ။ ကြှနျတျောလဲမခံနိုငျတော့ပါဘူး။
သားအိမျနံရံကို ပဈမှတျထားပွီး သုတျရညျတှေ မနားတမျး ပနျးခလြိုကျပါတော့တယျ။ မောမောနဲ့ ပကျလကျလှနျ အိပျနတေဲ့ ကြှနျတေျာ့ပျေါ ခြိုရီဟာ အုပျမိုးရငျး သူ့ညီမသှေးတှေ အရညျတှေ ကြှနျတျောရဲ့ သုတျရညျတှပေကြေံနတေဲ့ လီးကို ပါးစပျထဲ ငုံရငျး ပကြေံသမြှကို စုပျယူနပေါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ငပဲကလညျး ပှဲတိုငျးနိုငျစဈသူကွီး တဈယောကျလို ခမောကျကွီး တကားကားနဲ့ ခေါငျးပွနျထောငျလာရော။ တောငျတာမှ တကယျ့ သံမဏိခြောငျးကနြတောပဲ။ သိပျအခြိနျမဆှဲတော့ဘူး။
လေးဘကျထောကျပွနျပွီးကုနျးပေးနတေဲ့ ခြိုရီ စောကျဖုတျအိအိထဲလီးကို ရှောခနဲ သှငျးခလြိုကျတယျ။ ခြိုရီကတော့ ကွိုကျတဲ့ပုံပဲ .. ပိုထိတဲ့နညျးကိုး။ တအငျးအငျးနဲ့ ဝငျလာသမြှအခကျြတိုငျးကိုတောငျ့ခံနတေယျ။ ခြိုငျးအောကျကနေ လကျလြှိုပွီး နို့သီးတှကေို ဆုပျခပြေေးနရေငျး လီးကို ဒုတျတဈခြောငျးလို သတျမှတျပွီး သားအိမျကှဲမတတျ ဆောငျ့ပေးနမေိတယျ။ ခြိုရီခမြာ အရှ့ကို စိုကျကသြှားပွီး ပေါငျလဲ ကားသထကျကားလာပါတယျ။ ကြှနျတျောဟာ ရမကျမီးကွောငျ့ မိနျးကလေး တဈယောကျကို ညှာတာရမှနျးမသိတော့ပါဘူး။
ညှာလဲ ဒီမိနျးကလေးက ကွိုကျမှာ မဟုတျဘူးလေ။ ဒီတော့ မနားတမျး တအုနျးအုနျးမွညျအောငျ ဆောငျ့တော့ ခိုငျလှပါတယျဆိုတဲ့ တဲလေးဟာ သိမျ့သိမျ့တုနျနတေယျ။ ““ အား….. အား….. ”” နှဈယောကျစလုံး ပွိုငျတူပွီးလို့ အသကျထှကျသလိုအျောရငျး ထပျကသြှားပါတော့တယျ။ ဩ…….ဟိုမှာ နံပါတျ ၈ လာနပွေီ…. လာသှားမယျ ဟုတျတယျလေ… ခတျေကွီးကိုက သုတျသုတျစား သုတျသုတျသှားမှ စကားကောငျးနလေို့ ကြှနျတျောတို့စီးရမယျ့ကားလာနပွေီ။ မပွတျသေးတ့စဲ ကားကိုအတငျးဖွတျပွီး. … မှတျတိုငျကြျောရပျတဲ့ကားနောကျကိုခှေးတဈကောငျလိုပွေးလိုကျရတယျ မပွောခငျြပါဘူးဗြာ…
မနကျနဲ့ ညနဆေို ကားစီးရတာလူနဲ့ကိုမတူဘူး…ခတျေကွပျကွီးထဲမှာကိုရှေ စပါယျရာတှကေလညျးယဉျကြေးပါပတေယျ။ သငျတနျးဆငျးလာသလိုပါဘဲ။ ““ကဲ…လကျမှတျဝယျကွပါ….တဈကပျြလေးနဲ့လကျမတို့ရစနေဲ့….ဟိုဘကျကဘကွီးရှတေို့းပါ။ မကနြေပျရငျရှမှေ့တျတိုငျဆငျးနခေဲ့။ရှကေ့ညီလေးပိုကျဆံထုတျထားကှာ….တဈကပျြလေးကို သူတောငျးစားလိုလိုကျတောငျးနရေတယျ”” ““ကားခပေးကွပါဗြ။”” အဲ့ဒါပဲကွညျ့တော့….ကြှနျတျောလညျး အအျောခံရမှာကွောကျတာနဲ့…တဈကပျြကို နှမွောတသစှာနဲ့ထုတျပေးလိုကျရပါတယျ။
““စံပွလား…စံပွ…ရှထေ့ကျှထားကွပါခငျဗြားတို့မေးနတော နဲ့မိုးလငျးတော့မှာပ။ဲ ရှတေို့းပါ…မှတျတိုငျပါတယျဆရာရေ”” အိုး .. စိတျညဈစရာကောငျးလိုကျတာ…တကျကွဆငျးကွနဲ့ ဒီလိုပဲနတေို့ငျးကွုံနရေတော့…ဒီအခြိနျရောကျရငျရူးခငျြတယျ… အဲဒီအခြိနျမှာ ကြှနျတော့ကိုယိုငျဆငျးသှားအောငျ ကွိမျခွငျးကွီးနဲ့တိုကျခံလိုကျရပါတယျ။ စိတျတိုတိုနဲ့ရနျတှမေ့ယျလုပျတော့…လားလား…တျောတျောခြောတဲ့ကောငျမ လေးတဈယောကျပဲ။ ““ပေး…ညီမ…ဒီခွငျးကွီးနဲ့ဆို ကားအလယျကောငျမှာ လူတှဒေုက်ျခရောကျနမေယျ။
”” ကောငျမလေးက ကြေးဇူးတငျတဲ့အပွုံးနဲ့ ခွငျးတောငျးကိုကမျးပေးလိုကျပါတယျ။ ကားကလညျး ကွပျသထကျကွပျလာတာမို့…ခွငျးတောငျးမရှိတော့တာနဲ့သူနဲ့ကြှနျတျောဟာကျောနဲ့ကပျထားသလို ကပျနပေါတယျ။ ကောငျမလေးကတော့အနခေကျပုံပဲ။ ကြှနျတျောကတော့ဘယျလိုနမေယျထငျလဲ။ ကောငျမလေးက တောငျ့တောငျ့တငျးတငျးလေးဗြ။ ကွညျ့ရတာပနျးရောငျးပုံပဲ။ ခမျနှမျးနှမျးကလေးဆိုပါတော့…..ရုပျကလေးကတော့ သနားကမားလေးလေးပဲ…..ဆံပငျကိုရှကေ့ ဆာမူရိုငျးကညှေပျပွီး နောကျမှာ ကဈြဆံမွီးလေးခညျြထားတယျ။
မကျြလုံးလေးတှကေ ဇငျယျောတောငျလို ကော့နပွေီး မကျြတောငျကတြော့ ကော့ပွီးနကျနတောဲ့။ မကျြနှာတဈခုလုံးမှာ အလှဆုံးကမကျြလုံးပဲဗြာ…..ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ ခဈြခငျြလာတယျ…..ဝိုငျးပွီးညိုတိုတိုနဲ့ ရှနျးလဲ့နလေရေဲ့။ နှာခေါငျးလေးဟာ နဖူးကနေ ပွဆေငျးလာပွီး နှာဖြားနဲနဲကော့တယျ။ လနျလနျလေးပေါ့။
ဩ…….ဟိုမှာ နံပါတ် ၈ လာနေပြီ…. လာသွားမယ် ဟုတ်တယ်လေ… ခေတ်ကြီးကိုက သုတ်သုတ်စား သုတ်သုတ်သွားမှ စကားကောင်းနေလို့ ကျွန်တော်တို့စီးရမယ့်ကားလာနေပြီ။ မပြတ်သေးတ့စဲ ကားကိုအတင်းဖြတ်ပြီး. … မှတ်တိုင်ကျော်ရပ်တဲ့ကားနောက်ကိုခွေးတစ်ကောင်လိုပြေးလိုက်ရတယ် မပြောချင်ပါဘူးဗျာ…မနက်နဲ့ ညနေဆို ကားစီးရတာလူနဲ့ကိုမတူဘူး…ခေတ်ကြပ်ကြီးထဲမှာကိုရွှေ စပါယ်ရာတွေကလည်းယဉ်ကျေးပါပေတယ်။ သင်တန်းဆင်းလာသလိုပါဘဲ။
““ကဲ…လက်မှတ်ဝယ်ကြပါ….တစ်ကျပ်လေးနဲ့လက်မတို့ရစေနဲ့….ဟိုဘက်ကဘကြီးရှေ့တိုးပါ။ မကျေနပ်ရင်ရှေ့မှတ်တိုင်ဆင်းနေခဲ့။ရှေ့ကညီလေးပိုက်ဆံထုတ်ထားကွာ….တစ်ကျပ်လေးကို သူတောင်းစားလိုလိုက်တောင်းနေရတယ်”” ““ကားခပေးကြပါဗျ။”” အဲ့ဒါပဲကြည့်တော့….ကျွန်တော်လည်း အအော်ခံရမှာကြောက်တာနဲ့…တစ်ကျပ်ကို နှမြောတသစွာနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ““စံပြလား…စံပြ…ရှေ့ထက်ွထားကြပါခင်ဗျားတို့မေးနေတာ နဲ့မိုးလင်းတော့မှာပ။ဲ ရှေ့တိုးပါ…မှတ်တိုင်ပါတယ်ဆရာရေ””
အိုး .. စိတ်ညစ်စရာကောင်းလိုက်တာ…တက်ကြဆင်းကြနဲ့ ဒီလိုပဲနေ့တိုင်းကြုံနေရတော့…ဒီအချိန်ရောက်ရင်ရူးချင်တယ်… အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့ကိုယိုင်ဆင်းသွားအောင် ကြိမ်ခြင်းကြီးနဲ့တိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ စိတ်တိုတိုနဲ့ရန်တွေ့မယ်လုပ်တော့…လားလား…တော်တော်ချောတဲ့ကောင်မ လေးတစ်ယောက်ပဲ။ ““ပေး…ညီမ…ဒီခြင်းကြီးနဲ့ဆို ကားအလယ်ကောင်မှာ လူတွေဒုက်္ခရောက်နေမယ်။”” ကောင်မလေးက ကျေးဇူးတင်တဲ့အပြုံးနဲ့ ခြင်းတောင်းကိုကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ကားကလည်း ကြပ်သထက်ကြပ်လာတာမို့…ခြင်းတောင်းမရှိတော့တာနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်ဟာကော်နဲ့ကပ်ထားသလို ကပ်နေပါတယ်။ ကောင်မလေးကတော့အနေခက်ပုံပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုနေမယ်ထင်လဲ။ ကောင်မလေးက တောင့်တောင့်တင်းတင်းလေးဗျ။ ကြည့်ရတာပန်းရောင်းပုံပဲ။ ခမ်နွမ်းနွမ်းကလေးဆိုပါတော့…..ရုပ်ကလေးကတော့ သနားကမားလေးလေးပဲ…..ဆံပင်ကိုရှေ့က ဆာမူရိုင်းကေညှပ်ပြီး နောက်မှာ ကျစ်ဆံမြီးလေးချည်ထားတယ်။ မျက်လုံးလေးတွေက ဇင်ယော်တောင်လို ကော့နေပြီး မျက်တောင်ကျတော့ ကော့ပြီးနက်နေတာဲ့။
မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာ အလှဆုံးကမျက်လုံးပဲဗျာ…..ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ချစ်ချင်လာတယ်…..ဝိုင်းပြီးညိုတိုတိုနဲ့ ရွှန်းလဲ့နေလေရဲ့။ နှာခေါင်းလေးဟာ နဖူးကနေ ပြေဆင်းလာပြီး နှာဖျားနဲနဲကော့တယ်။ လန်လန်လေးပေါ့။ နှာခေါင်းလေးလဲ တစ်မျိုးချစ်စရာလေးပဲ။ သူ့မျက်နှာမှာ အဆိုးဆုံးကတော့ ပါးစပ်ပါပဲ။ တော်တော်ပြဲတယ်ခင်ဗျ။ နှုတ်ခမ်းကလည်းထူနေတော့ ကျန်တောတွေမလှရင်တော့ သူဟာ သိပ်ရုပ်ဆိုးသွားလိမ့်မယ်ထင်တာပဲ…..အခုတော့ သိပ်ချစ်စရာလေးပေါ့ဗျာ။ မျက်နှာလေးထောင့်ကျကျလေးမို့ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာမဲ့ပုံပဲ။
သဘောက ဘဝကိုရဲရဲရင်ဆိုင်မယ်ပေါ့ဗျာ။ အခုတော့…..ကျွန်တော်နဲ့ ပူးကပ်နေလို့ ရဲရဲရင်မဆိုင်ရဲပဲ…..ရှိုးတိုးရှန့်တန့်ဖြစ်နေတယ်။ သူ့ရဲ့လုံးကျစ်တဲ့ ရင်သားတွေဟာ ကျွန်တော့်လက်မောင်းကို တင်းတင်းကြီး ဖိကပ်ထားလေရဲ့…..အင်္ကျီပါးလေးဝတ်လာခဲ့တာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရအုံးမယ်။ သူလဲအင်္ကျီအနွမ်းရှန်သားလေးပဲ။ ဘော်လီခံနေလို့ နနဲေဲ ထာင်နေတယ်…..ကားတစ်ချက်ဆောင့်တိုင်း သူ့ရင်သားအိအိလေးတွေဟာကျွန်တော့်ရဲ့ကြွက်သားနဲ့တင်းမာနေတဲ့ လက်မောင်းတွေနဲ့ဖိပြီး ချေပေးသလိုဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်ဆုတ်လို့လဲမရ။ဘေးရှောင်လို့လဲမရနဲ့ အခက်အခဲတွေ့နေရှာတယ်။ အိုး…..ကျွန်တော်လည်း နောက်ဆုတ်ခွင့်ဘယ်ပေးမလဲ…..ကားပေါ်မှာ ထုတ်ဆီးတိုးပစ်မယ်ပေါ့….. ကောင်မလေးရဲ့ပေါင်တွေနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ပေါင်တွေပူးကပ်နေတယ်။ ကျစ်ကျစ်တင်းတင်းလေးတွေမို့အရသာထူးလှပါတယ်…..မသိမသာလေး သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကြားထဲကျွန်တော့်ခြေထောက်ကိုရအောင်ထိုးသွင်းလိုက်မိတယ်။ ကောင်မလေးကလဲသိတယ်ဗျ…..အထည့်မခံဘူး။ပေါင်နှစ်ချောင်းစိထားပြီး…..ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေ ကို ဒူးနဲ့ဖိတွန်းထားတယ်…..ရှင်ရှေ့မတိုးနဲ့နော်….. ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော့်ကိုစိုက်ကြည့်လာပါတယ်။
ရပါတယ်လေ။ စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့။ စိတ်ထဲက…..ဘုရားပွဲလှည့်နေတယ်…..ချွေးစီတွေကျနေပြီ. ….ရင်ထဲမှာမောနေတယ်။ ရမက်ဇောတွေပေါ့။ ““ဝုန်း…..”” ““အမလေး…..ဟဲ့…..ဘယ်လိုမောင်းတာလဲ။”” ကားက တစ်ချက်ဘရိတ်အုပ်လိုက်တော့ လူတွေအကုန်လုံး အခြေပျတ်ကုန်ပါတယ်….. အခွင့်အရေးစောင့်နေတဲ့ ကျွန်တောလည်း ယိုင်သွားတဲ့ကောင်မလေးကို ဖမ်းထိန်းလိုက်သလို….. ဟသွားတဲ့ကြားမှာလည်း ကျွန်တော့်ခြေထောက်ကိုထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။
သူ့လက်မောင်းကို ကိုင်ထားတဲ့လက်တွေဟာ တော်တော်နဲ့မဖြုတ်မိဘူး….. သူကလဲ ဘာမှမပြောဘူး….. ဒါပေမယ့်နောက်မှသတိဝင်လာပြီး အတင်းရုန်းထွက်လိုက်ပါတယ်။ …..သူ့ပေါင်ကြားထဲဝင်နေတဲ့ ပေါင်ကိုတော့ ပြန်ထုတ်လို့မရတော့ဘူး….. ခရီးလွန်နေပြီလေ….. ဟဲ….. ဟဲ….. ။ ပေါင်ကိုတောင့်ထားပေမယ့် ကားအမောင်းကြမ်းတော့….. တရွေ့ရွေ့နဲ့….. ပူနွေးတဲ့…. ပေါင်ခွကြားကို….. ကျွန်တော့်ရဲ့ပေါင်ရင်း ဝင်သွားပါတော့တယ်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ဝတ်ထားပုံမရဘူး….. ကျွန်တော့်ရဲ့ ပလေကပ်ပုဆိုးနဲ့ သူ့ရဲ့တရုတ်ပါတိတ်ကိုကျော်ပြီး သူ့ဆီးခုံမွှေးတွေနဲ့….. ခပ်ကြမ်းကြမ်းအတွေ့ကို….. ခံစားနေရတယ်။
ရှက်လို့ထင်ပါရဲ့…..ခေါင်းကလေးငုံ့ထားတယ်….. ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ပေါ်….. ခေါင်းမှီထားသလိုပါပဲ….. ဘေးအမြင်ကတော့…. ရည်းစားတွေပေါ့…..။ ကားတစ်ချက်ခုန်တိုင်း တစ်ချက်ကွေ့တိုင်း ဘရိတ်အုပ်တိုင်း သူ့စောက်ဖုတ် နွေးနွးလေးကို ပေါင်နဲ့ ပွတ်နေသလိုပါပဲ။ နောက်ကလူတွေကလည်း ဖိတွန်းနေတော့…..သူ့ကို ထပ်ပြီးနှိုးဆွနေသလိုပါပဲလား။ သူလဲ မောဟန်ရှိနေပါတယ်…..အသက်ရှုသံပြင်းပြင်းလေးတွေကို ကြားနေရတယ်လေ။ အခြေအနေကောင်းလာတယ်တော့ထင်တာပဲ။
အဆင့်တက်လို့ ထအော်ရင်….. သောက်ရှက်ပဲ….. ရဲရင်မင်းဖြစ်လို့ဆိုထားတယ်မဟုတ်လား…..အချစ် ဧကရာဇ်ဘွဲ့ခံဖို့ ဘိသိတ်ပလ်္လင်ကိုစလှမ်းလိုက်တယ်….. ဘယ်လိုလှမ်းလဲသိလား….. ဘယ်လက်ကို အသာလေး အောက်ချလိုက်တယ်….. ညောင်းသလိုလိုပေါ့…..။ နူးညံ့တဲ့ရင်သားတွေကို လက်ခလယ်နဲ့ ပွတ်မိတယ်….. ဖမ်းတိင်လိုက်မလို့ပဲ….. ဒါပေမယ့်….. စောင့်ဦးလေ။ ဗိုက်ကိုအသာလေးမှေးရင်း ရှပ်လိုက်ပြီး သူ့ဆီးခုံမှာ ဂိတ်ဆုံးသွားတယ်….. တစ်ချက်နောက်တွန့်သွားပေမယ့်…..နောက်တွန့်သွားတာကိုက လက်ကို နေရာပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ်။
လူကကျပ်တယ်မဟုတ်လား….. စောက်ဖုတ် တည့်တည့်ကို….. လက်ခုံကရောက်သွားပြီလေ။ အသာလေးပီတ်ပေးနေမိတယ်…..သူရဲ့ လက်တစ်ဖက်ဟာ ကျွန်တော့်လက်ကို အသာဆုတ်ကိုင်လာပါတယ်။ အိုး…..ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေပြီပေါ့…..ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး ရဲရဲသာ…..လှမ်းတော့။ ““ပဲခူးကလပ်ပါလား…..ပဲခူးကလပ်”” နားနားကပ်ပြီးနွားသိုးလိုအော်တဲ့ စပယ်ရာအသံကြောင့် မိုးကြိုးပစ်ခံရသလို တုန်သွားတယ် ““ခွေးမသား”” လို့စိတ်ထဲက မေတ်္တာပို့မိတယ်။ သူ့ရဲ့အေးစက်စက် လက်ကို ရုန်းပြီး စောက်ဖုတ်လေးကို လက်ခုံနဲ့ ပြန်ပွတ်ပေးမိတယ်
သူဟာ နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ပြီး ကျွန်တော်လက်ဖျံကို အတင်းကပ်ပြီးတွန်းထုတ်နေလေရဲ့….. ဘယ်ရမလဲ….. ယောက်ျားဆိုတာ….. ဒီဘက်မှာ ဇွဲက နွားသိုးတစ်ကောင်နီးပါးရှိတာမဟုတ်လား။ စာအုပ်ကိုကိုင်ထားရက်နဲ့ဘဲ….. လက်ခလယ်ကို အသာထုတ်ရင်း စောက်ဖုတ်တလျှောက် ထိုးပေးနေမိတယ်။ အတွဲကြောင်းလေးထဲ ရောက်သွားပါရဲ့….. ကောင်မလေးခမျာ ကျွန်တော့်ခြေထောက်က သူ့ပေါင်ကြားထဲ ရောက်နေတော့ ပေါင်လဲစိမရ….. လက်ကိုလဲ တွန်းထုတ်ဖို့အားက ကျွန်တော်တို့လောက်မရှိ ထဘီကိုတွဲပြီး စောက်ဖုတ်ထဲ လက်တစ်ဆစ်လောက် ဝင်နေမိတော့ အသာလေးကလိနေမိတယ်။
လက်အနောက်ပြန်ဖြစ်နေလို့ စိတ်ရှိသလောက် မလှုပ်ရှားနိုင်ဘူး….. ဒါနဲ့…..။ ““ညီမ….. ဒီစာအုပ်လေး ခဏလေးရယ်”” ဟုတ်တယ်လေ….. ဘယ်လိုမှ အကြံမထုတ်နိုင်တော့ဘူး။ ကောင်မလေးလဲ ဖီးလ်ဝင်နေရာက အလန့်တကြားယောင်ယမ်းပြီး ကိုင်လိုက်ပါတယ်။လွပ်လပ်သွားပါပြီ။ ကျွန်တော့လက်ထဲ ပြန်သွင်းမလိုလုပ်လို့ ကမန်းကတမ်းနဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို လက်ဝါးနဲ့ အုပ်ကိုင်လိုက်တယ်….. ကောင်မလေးခမျာ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိဘူး….. အတော်ရှက်သွားဟန် တူပါတယ်….. မျက်နှာလဲ ရဲလို့….. နားရွက်တွေလဲ တွတ်တွတ်နီလို့လေ…..။
သူ့ရဲ့….. အထူးနယ်မြေကိုပိုင်စိုးပိုင်နင်းနဲ့ အုပ်ထားကျွန်တော်ကို ဘာလုပ်ရမှန်းလဲ မသိပါဘူး….. စာအုပ်ကိုလဲမချနိုင် လက်တစ်ဖက်ကလဲ….. မယိုင်အောင် ထိန်းထားရတာနဲ့….. အတော်ကို ဒုက်္ခရောက်နေပါတယ်။ စောက်ဖုတ်ကို အသာပွတ်ပေးရင်း စောက်မွေးလေးတွေကို ဆွဲဖွပေးနေမိတယ်….. စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်း လေးထဲကိုလက်သွင်းပြီး မျဉ်းဆွဲပေးနေမိတယ်…..။ ကောင်မလေးခမျာ….. အသက်ရှုပြင်းလာပြီး နှုတ်ခမ်းတွေ တုန်လာတယ်…..။ ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့ အောက်ပိုင်းကအဖြစ်အပျက်တွေကို ဘယ်သူမှ သတိမပြုမိကြဘူး…..။
ထဘီရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း အရသာ စောက်ဖုတ်ထဲမှာ ခံလိုက်ရလို့ထင်ပါရဲ့ တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွါားတယ်။ နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်ရင်း ကြိတ်ခံနေပုံဘဲ….. အပျိုစင်လေးထင်ပါရဲ့….. ဒီထက် ထက်ပြောရရင်တော့ ကော်တာပဲ….. ပါကင်ကို စပါယ်ရှယ် ဖောက်တံနဲ့ ဖောက်ရအုံးမယ်။ ဘူတာရုံ မှတ်တိုင်ကျော်တော့ လက်ထဲမှာ စိုတိုတိုဖြစ်လာတယ်….. လာပြီထင်ပါရဲ့….. ဘက်စ်ကားပေါ်မှာ လုပ်ရတာဆိုတော့ စောက်စိကိုရှာမတွေ့ဘူး…..။ စွတ်လုပ်ရင်း ထဘီခပ်ကြမ်းကြမ်းက စောက်စေ့ကို ခဏခဏပွတ်ပေးမိလို့ ဆင်းလာတယ်ထင်ပါရဲ့….. တဖြေးဖြေးနဲ့….. ရဲလာပါတယ်။
သူလဲ….. သိပုံပဲ….. သိပ်ရှက်နေတယ်ထင်ပါရဲ့ ခေါင်းကိုသာ အတွင် ငုံ့ထားတယ်။ ခေါင်းကိုလေနဲ့ အသာလေးမှုတ်ပေးလိုက်မိတယ်။ စိတ်အိုက်နေမှာပဲလို့ တွေးမိလို့ပါ….. ။ ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်….. ခေါင်းလေးမော့ပြီး လေကိုခံယူနေတယ်လေ….. နဖူးဝင်းဝင်းလေးကို အနမ်းတစ်ပွင့်ခြွေလိုက်တယ်။ ကောင်မလေးလဲကြံရာမရပဲ လူကို ကိုယ်နဲ့ ဖိတွန်းပါလေရော….. အရှက်ပြေပေါ့…. လက်ကတော့ စောက်ဖုတ်မြုပ်နေတုန်းပဲ….. အရည်တွေရွှဲအိလို့ပေါ့…..။ ““ချာတိတ်….. မော့ကြည့်စမ်း””
ကြှနျတော့ရဲ့ မျောဒနျအသုံးအနှုံးကွောငျ့ ဖတျြခနဲ မော့ကွညျ့လိုကျတော့….. အို….. မကျြဝနျးမှာ မကျြရညျတှပွေညျ့လို့….. အိုငျပွီးေ စောကျဖုတျကွားထဲက လကျနှုတျပွီး အပျေါကအသာလေးပှတျပေးနမေိတယျ။ ခဏနမှေ သူ့ခါးကို ရဲရဲတငျးတငျးဖကျပွီး သူ့ကို ရငျခှငျထဲသှငျးထားလိုကျတယျ….. ခါးကလဲဗြာ သေးလိုကျတာ….. ထှာဆိုငျလောကျပဲရှိတယျ။ သူကတော့ ကြှနျတေျာ့ရငျဘကျမှာ ခေါငျးမှီရငျး ငွိမျနလေရေဲ့။ နှငျးဆီနံ့လေး သငျးနတေယျ။ တငျပါးတှဟော ဂှမျးဆိုငျလိုနူးညံ့ပွီး လကျကအသားထဲမွုပျဝငျသှားတယျ….. ဖငျကွားထဲတော့လကျမထဲ့ရဲသေးဘူး….. သိပျရှကျသှားအုံးမယျ…..။
““ နံမယ် ဘယ်လိုခေါ်လဲ….. ”” မဖြေပါဘူး…..။ ““ ချာတိတ်ကလည်းကွာ….. ဘာလဲကို့ကို စိတ်ဆိုးနေလား….. မဆိုးပါနဲ့ကွာ….. မြင်မြင်ခြင်း ချစ်မိသွားလို့ပါ….. ပြောလေ….. နံမယ်လေး ပြောပါ ”” မပွင့်တပွင့်နဲ့ ““ ဘာလို့ပြောရမှာလဲ ”” ““ ဟဲဟဲ သိချင်တာပေါ့….. မင်းလေးရဲ့ အချစ်ဆုံးကိုကို ဖြစ်လာတော့မှာပဲကွာ….. ဒါဆို ဒို့နံမယ်ပြောမယ်….. ကျော်ဝင်းမောင်တဲ့….. ဒုတိယနှစ် သင်္ချာအဓိက ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ….. နေတဲ့နေရာကတော့ မင်းပြောမှ ကိုကိုပြောမယ်….. ကဲ….. မင်းနံမယ်ပြော….. မရွှီးနဲ့နော်….. အိမ်အထိလိုက်မှာ….. တော်ကြာ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာမှာ နံမယ်လိမ်ကြီးပါနေအုံးမယ်။
”” မျက်လုံးလေးပြူးကြောင်သွားတယ်….. သူ့ပါးလေးကိုငုံ့မွှေးလိုက်တော့….. ဘေးက ကုလားတစ်ယောက်က ကားရိုက်တယ်ထင်ပြီးပြုံးကြည့်နေပါတယ်။ ““ ပြောလေ နံမယ်….. ပြောပါနော် ”” ““ လိုက်မနှောက်ရှက်ရဘူးနော်….. ချိုချိုတဲ့ ”” ““ အိုး ယဉ်လိုက်တဲ့နံမယ်လေး….. ခိုက်သွားပြီကွာ….. လူကြောင့်နံမယ်ပါလှသွားပြီ ”” အသာကပ်ညုရင်းနဲ့ -ီးတောင်တောင်ကြီးနဲ့ ဗိုက်ကို ပွတ်ပေးနေမိတယ်….. မသိဘဲနဲ့တော့နေမှာ မဟုတ်ဘူး။ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်….. -ီးဟာဟိုထိုးဒီထိုးနဲ့။
““ ကဲ…. ဂိတ်ဆုံးပြီ ”” ဟိုက်….. သောက်ခွေး….. ဘယ်လိုဂိတ်ဆုံးသွားတယ်မသိဘူး….. လူလဲချောင်နေပြီ….. ။ ဒါပေမယ့်ခေါင်းပိုင်းမှာ ရပ်နေမိလို့ပေါ့….. နို့မို့ဆိုရင် စောက်ရှက်ပဲ။ ကျွန်တော်ဆင်းရမဲ့မှတ်တိုင်က အများကြီးလွန်နေပြီ….. မတတ်နိုင်ဘူး….. သူ့တောင်းကို လှမ်းယူပြီး သူ့လက်တစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်လို့ ကားပေါ်ကဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ““ ဘယ်မှာနေတာလဲ ”” ““ မလိုက်ခဲ့နဲ့….. အိမ်ကမြင်သွားရင် အဆူခံနေရမယ်….. ”” ““ မလိုက်ပါဘူး….. နေရာသိရင်တော့….. တော်ပါပြီ။ ”” ““ ဟိုဘက်က စိုက်ခင်းထဲမှာ….. အိမ်ကတော့ ကရင်ခြံမှာ….. အခုပန်းရာသီမို့ စိုက်ခင်းထဲလာနေတာ ”” ““ စိုက်ခင်းအထိ လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ….. ””
““ ဟင်းအင်း….. နေပါစေ….. ”” ““ အိုကွာ….. ပို့ပေးရမှ ပြန်မယ် ”” ““ ဒီထက်တော့ကျော်ပြီးတော့ မလိုက်ရဘူးနော် ”” ““ အင်းပါ….. အချစ်ကလေးရယ် ”” သူ့လက်ကို ဖြေထုတ်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကမလွတ်ပါဘူး….. အတင်းဆွဲထားတော့ မရုန်းသာပဲ လက်တွဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့လက်ထဲမှာ ကျွန်တော့မှတ်စုစာအုပ်လေး ရှိသလို ကျွန်တော့လက်ထဲမှာလည်း သူ့ခြင်းတောင်းရှိနေပါတယ်။ အဆင်ကိုပြေလို့….. ည ၈နာရီကျော်မို့ လူရှင်းနေပါပြီ….. သူ့ခါးလေးကို ဖက်ချင်ပေမယ့် သူ့အပိုင်မို့ အတင်းမလုပ်ချင်ဘူး။
အရိပ်ကောင်းလှတဲ့ ကုက်္ကိုပင်ကြီးအောက်ရောက်တော့ နှင်ပါလေရော သူကတော့ သွားနေကျ လမ်းမို့ထင်ပါရဲ့ ကျွန်တော်တောင် ခပ်လန့်လန့်ပဲ။ ““ ပြန်ရတော့မှာလား နှုတ်ဆက်အနမ်းလေးပေးခဲ့ပါအုံး ”” ““ အိုး ”” ဆက်ခနဲ ရုန်းပြီး ထွက်ပြေးမလို လုပ်တဲ့ ချိုချိုရဲ့ ခါးသိမ်ကလေးကို လှမ်းဖက်ပြီး ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်ပါတယ်။ ရှင်မတောင် သနပ်ခါးနံ့သင်းနေတဲ့ ပါးနှစ်ဘက်ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်မွှေးပစ်လိုက်တယ် ထိတ်လန့်ပြီး ခပ်ဟဟဖြစ်နေတဲ့ နှုတ်ခပ်းလေးကို ငုံပြီးစုပ်ယူလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခါတည်း ကော့တက်ပြီး လက်ထဲက စာအုပ်ပါလွှတ်ချလိုက်ပါတယ် တစ်ခါမှ အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ အပျိုစင်လေးပဲ။ ကျွန်တော်လွှတ်ချလိုက်တဲ့ ခြင်းတောင်းဟာ တစ်လိမ့်လိမ့်နဲ့ အတော်ဝေးဝေးကို ရောက်သွားပါတယ် မြေပြင်ကို မျက်စိကစားကြည့်တော့ မြက်ခြောက်တွေနဲ့ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ် အားမှ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပွဲစား လာအုံးမှ အခုတော့။ ကော့ကော့လေးဖြစ်နေတဲ့ ချိုချိုကိုမျက်ခင်းပေါ် အသာပက်လက်လှဲချပေးလိုက်ပါတယ် လရောင်အောက်မှာ မျက်စိမှိတ်အိပ်နေတာ နတ်သမီးလေးကျနေတာပဲ မျက်နှာပေါ် စာအုပ်မိုးပြီး နမ်းရင်းလက်တစ်ဖက်က ရင်စိအင်္ကျီလေးရဲ့ နှိပ်ကြယ်သီးတွေကိုတစ်လုံးချင်းဖြုတ်နေတယ်။
အင်္ကျီကျွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲ လရောင်ကြောင့်လား မသိဘူး။ ကျောက်ဆစ်ရုပ်လေးလို ဖွေးနေတဲ့ သူ့ရင်ဘတ်နဲ့ ဗိုက်သားပြင်ဟာထင်းကနဲပေါ်လာပါတော့တယ်။ ““ ကိုကျော်ဝင်းမောင် ချိုကြောက်တယ် သွားပါရစေ ရှင့်ကိုလဲ ကျမသိတာမဟုတ်ဘူး ရှင်အနိုင်မကျင့်ပါနဲ့ ”” ““ အကိုက အနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုပါလား ကိစ်္စမရှိဘူး မင်းအမြင်မှန်ရလာအောင် ဘယ်သူကအနိုင်ကျင့်တယ် ဘယ်သူကအလိုတူအလိုပါဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိအောင်နို့စို့ပေးအုံးမှပဲ။ ”” ကျောနောက်ကို လက်ထည့်ပြီး ဘော်လီချိတ်တွေဖြုတ်ချလိုက်တယ် အမယ်မယ် သူက လက်ကိုကျောနဲ့ဖိထားသေးတယ်
ဘယ်ရမလဲ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကိုတောင် ဒီကကောင်က လက်တစ်ဖက်နဲ့ မ ပြလိုက်မယ်။ ဘော်လီပြုတ်သွားတာနဲ့ အရှေ့ရင်ကို လွမ်းထားတဲ့အကာကို လှပ်ပစ်လိုက်တယ်။ အိုး ခင်များတို့မြင်စေစမ်းချင်တယ်ဗျာ။ တကယ်တကယ် လိမေ်္မ်ာသီးထိပ်မှာ အသီးတံအတွက် စူစူလေးဖြစ်နေသလိုပါပဲ။ သူ့နို့သီးလေးရဲ့ ထိပ်မှာလဲ ခပ်စူစူလေး ကပ်ပြီးမို့နေတယ် နို့သီးမဟုတ်ဘူးနော် နို့သီးကို ကျွန်တော်ထပ်ပြီးလုပ်ပြမယ် ကြည့်နေ။ အခုတော့ကောင်မလေးဟာငြိမ်နေလေရဲ့ နို့အုံတစ်ခုကို အသာငုံပြီး စုပ်ယူလိုက်ပါတယ်
တဟင်းဟင်းနဲ့ရှက်လဲရှက် အရသာလဲတွေ့နဲ့ အတော့ကို အကြပ်ရိုတ်နေပုံပဲ။ နို့အုံရဲ့ နို့သီးထွက်လာမယ့်ထိပ်ကို လျှာနဲ့ မနားတမ်း ကော်ပတ်တိုက်ပေးလိုက်တယ်။ ခြေမှာကွေ့ကောက်နေပြီး ကျန်နို့အုံတစ်ခုကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီးပွတ်နေလေရဲ့။ အရမ်းဖီးတက်နေပြီကိုး။ ဒီတစ်ဖက်နို့အုံကိုစို့ရတာအားရတော့ ဟိုဘက်ကိုသွားစို့ရပါတယ် ကောင်းတယ်ဗျာ။ သူလဲကောင်း ကျွန်တော်လဲကောင်း။ ဖြစ်နိုင်ရင် အခမဲ့ နို့စို့ကုမ်္ပဏီတစ်ခုတောင် ထောင်လိုက်ချင်တယ်။ ခင်ဗျားတို့က ရှယ်ယာဝင်တွေပေါ့ ကျွန်တော်က ဒိုင်ခံစို့မယ်….။
နို့သီးနှစ်လုံးဟာ ဖောင်းလာပြီး နို့အုံတွေဟာလဲ တင်းမာလာပါတယ်။ နွားမတစ်ကောင်နို့ပြည့်လာသလိုပေါ့။ သူကတော့ တဏှာသွေးတွေနဲ့ ပြည့်ပြီး နို့အုံဖောင်းလာတာပေါ့။ နို့စို့ ခဏရပ်ပြီး သူ့ကို အခြေအနေကြည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တ်ာလည်း အတန်ကြာ မလှုပ်ရှားတော့ အသာမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်လေ။ ကျွန်တော်လည်းကြည့်နေမှန်းသိရော နို့တွေကို လက်နဲ့ပိုက်ပြီး ရှက်စနိုးနဲ့ အုပ်သွားတယ်။ သြော်….. မိန်းမ….. ။ သူ့မျက်နှာလေးကို ပြန်ပြီးဆွဲလှည့်လိုက်ပါတယ်။ ““ ကောင်းလား….. ကောင်းလား….. နို့စို့တာကောင်းလားဟင်….. ”” ဘာသံမှထွက်မလာဘာဘူး။
““ အေးနေရင်တော့ စကားပြောအောင်လုပ်ရမှာပဲ ပထမအော်ရမယ် နောက်တော့ စကားပြောလာရမယ် နို့စို့တာကောင်းလား မကောင်းလားမေးနေတာကို မဖြေဘူး မကောင်းဘူးဆို နောက်မစို့တော့ဘူး။ ”” အဲ့ဒီလို ခပ်ထန်ထန်ပြောတော့လည်း မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ သနားစရာပါပဲ။ ““ ဘာတွေလာမေးနေမှန်းမသိဘူး ”” ဟုတ်သားပဲ ကျွန်တော် လောသွားတယ် သူ့ခါးက ထဘီကို အသာဖြေချလိုက်တယ် ပြီးတော့ မချွတ်ေးပဲ ထဘီပေါ်က စောက်ဖုတ်ကို လက်ဝါးနဲ့အုပ်ပြီးပွတ်ပေးနေရတယ် ဗြုံးခနဲ ချွတ်ချရင် ရှက်သွားရော တော်တော်လေးကြာအောင်လဲ ပွတ်ပေးပြီးရော ခေါင်းလေးဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ထလာပါတော့တယ်။
စပ်စပိုင်ဒါဝတ်လေ့ရှိဟန်မတူဘူး ထဘီကို အသာရှောချလိုက်ပါတယ်။ အိုး လှလိုက်တာဗျာ။ တကယ်ပါပဲ ခင်ဗျားတို့လဲ ဒီလိုမျိုးတွေ့ဘူးဖြစ်မှာပါ။ ဖာသည်တစ်ယောက်ရဲ့ အဖုတ်ဟာ ရမက်ဇောတွေထန်လာအောင် နှိုးဆွချင် နှိုးဆွနိုင်မယ် .. ဒီလို ပစ်္စည်းသန့်သန့်လေးတွေလိုတော့ စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဖူး။ .. အခုလဲကြည့်လေ အပျိုစင်တစ်ယောက်ရဲ့အဖုတ်ကို အနီးကပ်မြင်ခွင့်ရတဲ့ ကျွန်တော်တစ်ယောက် အသက်ရှုမှားသွားတာအပြစ်လား။ စောက်ဖုတ်လေးကို တရှုံ့ရှုံ့နဲ့ ယုယုယယနမ်းတော့ ထိတ်လန့်ခြင်း ရှက်ကြောက်ခြင်းတို့ဟာ သူ့မျက်နှာပေါ်မှာ ထင်ဟပ်လာပါတယ်။
အရိုင်းပေကိုး။ စောက်ဖုတ်ရဲ့ စေးကပ်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးနှစ်လွှာကို လူမိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ စိုရွှန်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းရဲရဲလေးလို သဘောထားပြီး စုပ်နမ်းလိုက်ပါတယ်။ နဲနဲတော့ညှီတာပေါ့ဗျာ။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ အပျိုစင်ကို လိုးချင်ရင်တော့ ဒီလောက်တော့ ခံနိုင်ရမှာပေါ့။ ရေချိုးခန်းနဲ့ အကျအနမချိုးနိုင်တဲ့ လူတွေဆိုတော့လည်း ဒီလောက် အနံ့ရှိတာ အဆိုးမဆိုသာပါဘူး။ တစ်ချို့ဆို နာမည်ကြီးဆပ်ပြာတွေသုံးရဲ့နဲ့တောင် စောက်ဖုတ်က ပုတ်နေတယ်။ အလိုဗျာ ရေးရင်းနဲ့ ဘယ်တွေလျှောက်ရောက်သွားမှန်းမသိပါဘူး။
အကွဲကြောင်းလေး တစ်လျှောက် လျှာကလေးနဲ့ မျဉ်းဆွဲပေးလိုက်မိတယ်။ အခုနက ရှက်နေတဲ့ ကောင်မလေးဟာ ပေါင်ကို အတင်းဖြဲပြီး ဖင်ကြီးကော့တက်လာပါလေရော ဗျာ။ အခုနက ခြောက်လို့ ကပ်စီးစီးဖြစ်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်လေးနှစ်လွှာဟာ အခုတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေါ် စီမံကိန်းအရ ကျွန်တော့တံတွေါ်တွေနဲ့ ချွဲပြီး အလွယ်တကူ လျှာဟာ အထဲဝင်နိုင်ပါတော့တယ်။ အိုးကောင်းလိုက်တာဗျာ လျှာလကာရည်အိုးထဲ လျှာထဲ့လျက်ရသလိုပါဘဲ အနံ့ကလည်း တစ်မျိုး အရသာကလည်းတစ်မျိုး မဆိုးပါဘူး။
လျှာကလေးဟာ ဟိုထိုး ဒီထိုးနဲ့ နောက်ဆုံး သူ့ရဲ့ပစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ စောက်စေ့ကို သွားပွတ်တိုက်လိုက်မိပါတယ်။ စောက်စေ့လေးဟာ ပျော့အိနူးညံနေပြီး အဆီခဲလေးလို အစ်နေသဗျာ လျှာဖျားလေးနဲ့ ဟိုထိုးဒီထိုးလုပ်လိုက် ဖိပြီးပွတိဆွဲလိုက်နဲ့ နည်းမျိုစုံသုံးပြီး ဆွပေးလိုက်တာ တစ်ခါတည်း စောက်စေ့ဟာတောင်လာပါလေရော။ သူရဲ့ စောက်ဖုတ်ဟာပြောင်းလဲမှုတွေကို ခံစားရပြီး အံ့သြနေပုံရတဲ့ ကောင်မလေးဟာ သူ့စောက်ဖုတ်ကို သေချာစွာ ငုံ့ကြည့်နေပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။
အပျိုစင်မို့ နဲနဲဆွပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ သွေးကြောထဲက သွေးတွေဟာ အက်ဆစ်တွေဖြစ်သွားရောပေါ့။ အခုစောက်ခေါင်းထဲမှာ ဆိုးသွမ်းတဲ့ မြွေတစ်ကောင်လို အငြိမ်မနေတတ်တဲ့လျှာနဲ့တွေ့တော့ ရမက်မီးဟုန်းကနဲ တောက်ပြီးသွေးကြောထဲက အက်ဆစ်တွေကို ပွတ်ပွတ်ဆူစေပြီပေါ့။ ချိုချိုရဲ့ ပါးစပ်ကနေ တရှီးရှီးနဲ့ ငရုပ်သီးစပ်သလို အသံတွေထွက်နေပါတယ်။ ပေါင်တံကြီးဖြဲဟပြီး ပြဲသထက်ပြဲပြီး ပန်းနုရောင် စောက်ဖုတ်လေးကို အခုဏက စိတ်သိပ်မပါပေမယ့် အခုတော့ နှာခေါင်းရော မေးစေ့ပါ စောက်ဖုတ်ထဲမြုပ်ပြီး လျှာကို အတွင်းခေါင်းထဲရောက်အောင် အတင်းထိုးသွင်းပြီး လျှာရဲ့ အရသာစုလေးတွေနဲ့ စောက်ခေါင်းချောချောလေးကို လှည့်ပြီး ယက်ပေးနေမိတယ် ။
ကောင်မလေးဟာ ကျွန်တော့်ကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲကို ဖိပေးပြန်ပါတယ်။ စောက်ခေါင်းလေးဟာလဲ တရွရွနဲ့ လျှာကိုပြန်ပြီး ဆုပ်နယ်ပေးနေပြီး စောက်စေ့လေးဟာ နှုတ်ခမ်း ငုတ်တိုလေးတွေကြောင့် ဖရုံစေ့တစ်စေ့လို တောင်မတ်နေပါတော့တယ်။ ““ အား….. အား….. အမေး….. အင့်….. အင့် ”” ဟုတ်ပါရဲ့ တတ်ဆိတ်နေတဲ့ညကို ဖောက်ထွင်းပြီးတော့ ကောင်မလေးရဲ့ အသံတုန်တုန်လေးဟာ လှိုက်မောစရာပေါ် ထွက်လာပါတယ်။ ပြီးသွားပြီလေ…..။ စောက်ခေါင်းထဲက အရည်တွေဟာ လေခိုနေတဲ့ မီးသတ်ပိုက်ကကျလာသလို….. ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲ အံကျလာပါတော့တယ်။
ဖင်ဟာမြေပြင်ကနေ တစ်ထွာလောက်ကော့တက်ပြီး ဘေးကမြက်ပင်တွေကို ပြတ်ထွက်သွားအောင်ဆုပ်ကိုင်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းနဲ့ မေးစေ့မှာလဲ သူ့ရဲ့သုတ်ရည်တွေပေပွလို့ပေါ့ ပါးစပ်ထဲဝင်လာတာတွေကိုတော့ မထွေးထုတ်ပါဘူး။ မျိုချလိုက်တယ်။ စောက်ဖုတ်ထဲက အရည်တွေဟာ လရောင်ကြည်ရောင်တွေကြောင့် ငွေရောင်အဆင်းတောက်ပြီး ငွေရည်တွေလို စောက်ဖုတ်မှာ တွဲလောင်းခိုနေတယ်ဗျာ။ သိပ်ကြည့်ကောင်းတာပဲ။ ကင်မရာသာရှိရင် ဓါတ်ပုံရိုတ်ထားတယ်။
အခုတော့ ပက်လက်ကလေးငြိမ်နေတာ အသက်ကင်းမဲ့နေသလိုပါပဲလား။ ကောင်မလေးကို အသာခြေနှစ်ချောင်းက ကိုင်ပြီး အခုနက သူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေ တင်ထားတဲ့သစ်မြစ်ခုံးခုံးကြီးပေါ်မှာ ခါးကို တင်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ခြေထောက်တစ်ချောင်းကို သစ်ပင်ခြေရင်းမှာ လှမ်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုတော့မြက်ခင်းပေါ်မှာပဲ ဖြဲထားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော့်လီးကြီးဟာလဲ ကိုက်ခဲနေလောက်အောင် မာတောင်နေပါတယ်။ လီးထဲက အကြောတွေဟာ အရည်ပြားကို ဖောက်ထွက်ပြီး ခုန်နေရဲ့။
ခရမ်းရောင် လက်နေတဲ့ ဒစ်ထိပ်ကို ချွဲကျိနေတဲ့ စောက်ခေါင်းထဲမှာ နှစ်ပြီး အသာမွှေပေးနေတယ်။ ကောင်မလေးက သိရောပေါ့။ လိုးတော့မယ်လို့။ အရည်ကြည်လေးတွေစို့လာပြန်ရော။ တွန့်လိမ်နေတဲ့ စောက်ခေါင်းကို အသာလက်နဲ့ဟပြီး လီးဒစ်ကိုတေ့ပြီးတော့ အသာသွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်နဲ့ ဆွပေးနေပါတယ် ။ ကောင်းလဲကောင်းတဲ့ အရသာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အကြောပေါင်းတစ်ထောင်ဆိမ့်သွားအောင်လို့ သူ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးဟာနူးညံ့လှပါတယ်။ သူလဲကျွန်တော့်ရဲ့ နူးညံ့တဲ့ဒစ်ဖျားကြောင့် အရသာတွေ့နေပုံပါပဲ။
စောက်စေ့ကလေးဟာ တဆတ်ဆတ်နဲ့ စောက်ပတ်ကလေးဟာ တရွရွနဲ့ ပါးစပ်ထဲက တဟင်းဟင်းနဲ့ ကောင်မလေးဟာ အင်မတန် အလိုးခံချင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ လီးကြီးကို စောက်ခေါင်းထဲမှာ သွတ်သွင်းထားချင်နေပုံပဲ။ လီးကိုနဲနဲဖိသွင်းလိုက်ပါတယ် အင့်ကနဲ အသံထွက်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီနားမှာ ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်ပြီး တရွေ့ရွေ့နဲ့ဝင်လာလိုက်တာ အပျိုစင်မှေးကိုသွားထောက်မိပါလေရော ကောင်မလေးလဲ လီးဝင်တဲ့ တလျှောက်လုံး တကျွတ်ကျွတ်နဲ့ စုပ်တသပ်သပ်နဲ့ပေါ့။
အပျိုစင်မှေးကို အသာဖိလိုက် ပြန်နှုတ်လိုက် လုပ်နေတော့ ကျင့်သားရသွားပုံပဲ ငြိမ်သွားလေရဲ့ ။ ကော့တက်နေတဲ့ ခါးနှစ်ဖက်ကို လက်နဲ့စုံကိုင်ပြီး အပျိုစင်မှေးကို မာတောင်နေတဲ့ လီးကြီးနဲ့ ဖိထောက်ချလိုက်တော့ပါတယ်။ ““ ပြွတ်….. ဗြစ်….. ဖောက်…… ဒုတ်….. အင့်….. အင်း….. အမေ့….. အား….. သေပါပြီ….. အမေ့ရဲ့…… ”” ဟုတ်ကဲ့ ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ ခင်ဗျားတို့လဲလန့်မသွားနဲ့အုံး လူသတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ပန်းဆွတ်နေတာ။ ကောင်မလေးရဲ့အသံဟာ တိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုဓားနဲ့ထိုးလိုက်သလိုပဲ။ စူးရှပြီး ငှက်ဆိုးတောင် လိပ်ပြာလန့်သွားနိုင်တယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ထန်နေပြီမို့ သိပ်မမှုပါဘူး။ ““ ဗြစ်… ဗြွတ်… ပြွတ်… ဒုတ်… အင့်… အီးဟီး… ဟီးဟီး… ဒုတ်… အား… ဒုတ်… အိုး… အိုး… ဟီး… အင့်… အင့်… ဒုတ်… အား ဟင်း… ဟင်း… ဟင့်… ”” ကောင်မလေးဟာ ကြောက်သွားပုံပဲ… ငိုရှိုတ်ရင်း အလိုးခံနေရရှာတယ်။ စောက်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းနုနုလေးဆီမှာ လီးကြီးဟာ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာလို သဘောထားပြီး ဝင်ချင်သလိုဝင် ထွက်ချင်သလိုထွက် နေပါတယ်။ သွေးတွေကတော့ရဲနေတာပဲ ငရုတ်သီးထုပ်ပေါက်သွားသလား အောက့်မေ့ရတယ်။
အတော်ကြာကြာလဲလိုးပြီးရော သူ့ရဲ့အပျိုစင်မှေးလေးဟာ လီးရဲ့ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ကြောင့် လိပ်ပြီး ပြတ်ထွက်သွားတယ် လီးအထုတ်မှာ အပြင်ကိုပါလာပြီး သွေးတွေနဲ့ရောလို့ ရော်ဘာပြားတစ်ပြားလိုပါပဲ လိပ်ပြီး စောက်ဖုတ်မှာ ကပ်နေတယ်။ ကောင်မလေးကတော့ ငြိမ်သွားပြီး ကောင်းလာတယ်ထင်ပါရဲ့ ကောင်းရမယ်လေ။ ဒီအရသာဟာ ဘယ်သူများတောင့်ခံနိုင်လို့လဲ။ လီးကသာ မှန်မှန်ကြီးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ အလုပ်များနေတာ။ ““ ဟော… ”” ဘာမှကြာလိုက်တယ် မထင်ရဘူး။ ကောင်မလေး စောက်ဖုတ် အခေါင်းဟာကျွန်တော်လီးကို အတင်းဆွဲဆုတ်ပြီး မလွတ်တမ်း ညှစ်ထားလိုက်ပါတယ်။
လီးထိပ်မှာတော့ ရေနွေးလို ပူနွေးတဲ့ အရာတွေ လာထိလို့ကောင်မလေးပြီးသွားမှန်း သိရတယ်။ စုပ်ထားရက်နဲ့ပဲ ရအောင်ဆောင့်ပေးလိုက်တော့ ကျွန်တော်လည်း ကြာကြာမခံနိုင်တော့ဘူး လီးတင်မက တစ်ကိုယ်လုံး တင်းခနဲဖြစ်သွားပြီး သုတ်ရည်တွေကို စောက်ခေါင်းထဲကလျှံကျအောင် သားအိမ်ကို ပန်းချလိုက်ပါတယ်။ သိပ်ကောင်းတာပဲဗျာ။ သိပ်ကောင်းတာပဲ။ အပျိုကိုလိုးရတာ ဘာနဲ့မှ မတူဘူး။ ကောင်မလေးငြိမ်ကျသွားသလို ကျွန်တော်လည်းသူ့ကို အသာပက်လက်အနေအထားဖြစ်အောင်ထားပြီး သူ့ဘေးမှာ ဝင်ထိုင်လှဲရင်း နို့သီးတွေကိုဆုပ်ချေရင်း အမောဖြေနေရပါတယ်။
““ ကျမပြန်ရတော့မယ် ဖယ်ပေးအုံး ”” အရှက် အကြောက်တို့နဲ့ ရောပြီး တုန်ယင်နေတဲ့ အသံနဲ့ ကောင်မလေးက ကျွန်တော့်ကို ရှိုက်ပြီးပြောပါတယ်။ ““ အိုး ကိုယ်ပို့ပေးမှာပေါ့ ချိုလေးရယ် အဝတ်အစားလဲ ဖြေးဖြေးထ ကိုယ့်ကိုကိုင်ထား။ ”” မတ်တပ်ထအရပ်မှာ စောက်ဖုတ်ထဲမှာ အိုင်နေတဲ့ သွေးနဲ့သုတ်ရည်တွေဟာ ဝေါကနဲ ကျလာပါရောဗျာ။ ကောင်မလေးပိုလန့်သွားတယ်။ ““ စိတ်ချ ဘာမှမဖြစ်စေရဘူး ဒါအပျိုမှေးပေါက်လို့ထွက်တာ ”” သူ့ကိုဘော်လီချိပ်တပ်ပေး အင်္ကျီဝတ်ပေး ထဘီဝတ်ပေးပြီးတာနဲ့ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ပစ်္စည်းတွေ ကောက်ပြီး သူ့ခေါ်ရာနောက်ကို အသာလိုက်လာပါတယ်။
သူ့ခါးကလေးကိုတော့ လက်တစ်ဖက်နဲ့ သိုင်းဖက်လို့ပေါ့။ တဖြေးဖြေးနဲ့ မီးရောင် မှိတ်တုပ်မှိတ်တုပ် လမ်းလေးတစ်ခုထိ ရောက်လာပါတယ်။ အိုဗျာ ကောင်းကင်ကြီးဟာ အစအဆုံးမရှိပဲဖြစ်နေသလို ဒီတဲလေးဟာလည်း ကွင်းပြင်ကျယ် ပန်းစိုက်ခင်းကျယ်ကြီးထဲမှာပါ့ဗျာ။ အဲ့ဒီစိုက်ခင်းကျယ်ကြီးထဲမှာ တဲကလေးက ထီးထီးတည်းဖြစ်နေတာ အိပ်မက်ကမ်္ဘာထဲ ရောက်နေသလိုပါပဲလား။ ““ မမရေ မမ အောင်ဇေ အောင်ဇေ အိပ်ပြီလား ဒေါ်လေးကို တံခါးဖွင့်ပေးပါအုံး ””
““ ဟဲ့ ညီမလေး နောက်ကျလှချည်လား သူကကော ဘယ်ကလဲ လာလာ မိုးချုပ်လှပြီ မမဖြင့် စိတ်ပူလိုက်ရတာ ”” ““ လမ်းမှာ လမ်းသူရဲ ကလေကချေတွေလိုက် နှောက်ယှက်လို့ ဒီက အကိုကလိုက်ပို့ပေးတာပါ မမရယ်။သူသာမကယ်ရင် ကျမဘဝတော့ဒုက်္ခပဲ ”” ကောင်းပါ့ဗျာ တော်တော်လိုက်တဲ့ ချိုချို ။ ““ အော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ကျမညီမလေးက ညပိုင်းအထိ ဇွဲနဲ့ဈေးရောင်းတော့ တနေ့ဒါမျိုးဖြစ်မယ်ထင်သားပဲ ကျေးဇူးပဲရှင် ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး ”” စကားလည်းပြော မျက်လုံးကလဲ ကျွန်တော့် တကိုယ်လုံးကို နေရာအနှံ့လိုက်ကြည့်နေတယ် သူကလဲသူ့ညီမလို မိန်းမချောပဲ။
သူ့ညီမထက်တောင် ဘော်ဒီကောင်းသေး နို့ကြီးတွေက ဘရာဇီယာမပါပဲ အင်္ကျီအောက်မှာ ကြွားကြွားရွားရွား တင်ပါးကြီးတွေက ကားထွက်နေလေရဲ့ သူ့အရပ်ကလဲ သူ့ညီမထက်ပိုမြင့်ပါတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ခလေးအမေထင်တယ် သူ့ဘေးမှာ ၅နှစ်အရွယ် သူ့ရုပ်မျိုးနဲ့ ချာတိတ်တစ်ကောင် ရပ်နေတယ်။ ““ မမ အစ်ကို့ကို ထမင်းပါအုံး ဆာရော့မယ် ကျမရေချိုးလိုက်အုံးမယ် ”” ““ ဟုတ်သားပဲ မေ့နေလိုက်တာ လာ လာ ဒီမှာထိုင် ”” ““ နေပါစေ ကျွန်တော်မစားဘူး အခုပြန်မှာ ””
““ မစားရင် မခေါ်ဘူးနော် အစ်ကို လမ်းမှာတော့ ချိုချို ချိုချိုနဲ့ အခုသူများကျွေးတာကျ မစားရင် နောက်လမ်းမှာတွေ့တောင် ရှောင်သွားမှာ ”” ““ ကဲ ကဲ စားပါမယ်ဗျာ…. အော်…. ဒါနဲ့ အစ်မကြီး… ”” ““ ရှင်… ပြောပါ ”” ““ ထမင်းများများ ထည့်ခဲ့ပါ… ”” ကျွန်တော်တို့ စားရင်းသောက်ရင်း စကားပြောရင်းနဲ့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားတယ် မသိဘူး။ ဟိုးအဝေးဆီက လွင့်လာတဲ့ (၁၁)နာရီသံချောင်းခေါက်သံကြောင့် သုံးယောက်သား မျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်။ ““ ဟဲ့တော့… (၁၁)နာရီထိုးပြီ ဒုက်္ခပဲ မမရေ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ””
““ ဒီမှာပဲအိပ်ပေါ့ ဒီအချိန် အပြင်ထွက်ရင်တော့ အဖမ်းခံရမှာပဲ ”” တိုတိုပြောရရင် ကျွန်တော်ကို သူတို့ညီမနှစ်ယောက်ဘေးက အခန်းမှာ နေရာချပေးတယ်။ ကြမ်းကမာတော့ တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်နိုင်ဘူး။ ဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်နဲ့ ည(၁)နာရီထိုးပါရော မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားတဲ့ အခိုက်နူးညံ့ပျော့အိတဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် ကျွန်တော်လည်းလန့်နိုးသွားပြီး…။ ““ ဟင် မမ ပါလား ”” ““ ဟုတ်တယ် မောင်လေးရယ် မမ မနေနိုင်တော့လို့ မောင်လေးဆီလာခဲ့တာပါ။ မမကိုတော့ အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့နော် ””
မသေးပါဘူးခင်ဗျာ အဖြေပေးတဲ့ အနေနဲ့ ပြည့်ဖြိုးတဲ့ နှုတ်ခမ်းလွှာလေးကို ငုံ့ပြီး စုပ်ယူလိုက်တယ် အားပါး ဒီမိန်းမက သဘာပဲ ကျွန်တော်အာခေါင်ထဲကို လျှာထည့်ပြီးကလိပါလေရော လက်တစ်ဖက်ကလဲ အင်္ကျီကြည်သီးတွေ တစ်လုံးချင်းဖြုတ်ပြီး ရင်ဘတ်ကို ပွတ်လိုက် ရင်ဘတ်မွှေးတွေနဲ့ ကစားလိုက်နဲ့ ဖီးလ်တွေပေး နေတယ်။ကျွန်တော်လဲ သူ့အင်္ကျီကိုဟပြီး ထွားအိနေတဲ့ နို့အုံတွေကို အသာဆုပ်နယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နို့သီးတွေဟာ လက်သန်း တစ်ဆစ်လောက်ရှိမလား မသိ ကောင်းလိုက်တာ တရွေ့ရွေ့နဲ့သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်လီးဆီကို ရွှေ့ဆင်းလာပါရော။
ခေါင်းထောင်ချင်ချင်ဖြစ်နေတဲ့လချောင်းကို လက်နဲ့ ဆုပ်နယ်ပြီး အသာဂွင်းတိုက်ပေးနေပါတယ်။ အားကျမခံ စောက်ဖုတ်မို့မို့ကြီးကို အသာဆုပ်ကိုင်ပြီး ပွတ်ပေးသလို လက်ချောင်းတွေကလဲ စောက်ခေါင်းထဲဝင်ပါလေရော ကလေးတစ်ယောက် အမေသာဆိုတယ်။သိပ်မကျယ်ပါဘူး။ အနေတော်ပဲ အရည်တွေကလဲ ရွှဲလို့ ရမက်ပြင်းတဲ့မိန်းမပဲ။နှုတ်ခမ်းချင်းခွာထိုင်လိုက်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။ လီးကြီးဟာ မြွေတစ်ကောင်လို ခေါင်းတလှုပ်လှုပ်နဲ့။ သူ့ခေါင်းလေးငုံ့ပြီးလီးဒစ်ကို ငုံလိုက်ပါတယ်။
““ အိုး မမ မမ ကောင်းလိုက်တာဗျာ ကောင်းလိုက်တာ မမ ဟုတ်တယ်လျှာနဲ့ ထိုးပေး အား မမရယ် ”” ကျွန်တော်ရဲ့ အသံတိုးတိုးလေးဟာ မမကိုပိုမို လှုပ်ရှားစေပါတယ်။ ”” ပြောရအုံးမယ် သူ့နာမည်က ချိုရီတဲ့ဗျာ။ ညီမနှစ်ယောက်လုံး ကျွန်တော့်အပေါ် ချိုကြပါပေတယ်။ သာဓု သာဓု သာဓု…. ။ လီးကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ စုပ်ယူလိုက်တာ တစ်ခါထဲ လီးထိပ်က လရည်တွေဟာ ပိုက်နဲ့ကျသလို တဝေါဝေါ ဆင်းကျလာပါရော သူလဲ ရေငတ်တဲ့လူလို တကျိုက်ကျိုက်နဲ့ မြိုချလိုက်တယ်လေ။
လီးကြီးဟာ သေမသွားပဲ ဆက်တောင်နေတုန်းပဲ။ လီးကြီးဟာသေမသွားပဲဆက်တောင်နေတုန်းပဲ မမဟာ သူ့ထဘီကိုကွင်းလုံးချွတ်ချလိုက်ပြီး တောင်နေဆဲဖြစ်တဲ့လီးပေါ် ခွထိုင်ရင်း စောက်ခေါင်းထဲကိုစိုက်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ ““ ဗြစ် ဗြစ် ဗြစ် ဒုတ် အင့် ”” လီးဟာ သိပ်မကျပ်ပေမယ့် သိပ်လဲမချောင်လှတဲ့ စောက်ခေါင်းထဲ အခက်အခဲမရှိဝင်သွားပေမဲ့ ရှည်တဲ့လီးမို့ သားအါမ်ကို သွးထောက်မိပါတယ်။ ချိုရီတစ်ယောက် အင့်ကနဲခါဆင်းသွားပါလေရော။ ဒါပေမယ့် အရင်က အကျင့်ရှိပုံရတယ် မနားပဲ အသာကိုယ်ကိုကြွလိုက် နှိမ့်လိုက်နဲ့ ဆောင့်နေပါရော ။
““ မမ မမ ကောင်းလိုက်တာ မမရယ် သိပ်ကောင်းတယ် မမကို ချစ်မိသွားပြီ နာနာဆောင့်လေ မမ ဘာလဲ သားအိမ်နာမှာ စိုးလို့လား ကျွန်တော်ရဲ့ သွေးထိုးပင့်ကော် စကားတွေကြောင့် ချိုရီဟာ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကိုလက်ထောက်အားယူရင်း နို့ကြီးတွေလှုပ်ပြီး ပြုတ်ကျတော့မတတ် အားရပါးရ ဆောင့်ပေးပါတယ်။ ပါးစပ်ကလဲ တအင်းအင်းနဲ့ ခဏချင်းအတွင်းမှာပဲ နှစ်ယောက်လုံး ချွေးတွေရွှဲသွားပါတယ်။ သူကလဲဗျာ အရည်တွေကျပဲကျနိုင်တယ်။ ကျွန်တော့်လမွှေးတွေ စိုရွှဲပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလည်း အိုင်နေပြီ။
စောက်ခေါင်းက မချော်လို့သာပေါ့။ တဖြေးဖြေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ယူသလို နို့တွေနဲ့ ရင်ဘတ်ကို ဖိကပ်ထားပါတယ်။ လီးဟာသားအိမ်ကိုဒုတ်ကနဲဒုတ်ကနဲ ဆောင့်မိသလို သူ့နှုတ်ကလဲ တအင်းအင်းနဲ့ မောသံကြီးထွက်နေပါတယ်။ စောက်ခေါင်းဟာ လီးကိုရစ်ထားပြီး လီးဒစ်ကအသားနုလေးတွေဟာ သားအိမ်မှာ သွားဆာင့်တာကို တိုက်ချင်းပစ် ဒုံးပျံတီထွင်တဲ့ သိပ်္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်က သူ့ဒုံးပျံပစ်မှတ်ကိုထိရင်ဖြစ်မတဲ့ပီတိထက် ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ ပီတိကပိုမှာပါ။ မကြာပါဘူး (၁၅မိနစ်ကျော်ပါတယ်) ချိုရီဟာ တအင်းအင်းနဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲက အရည်တွေပန်းချလိုက်ပြီး ကျွန်တော်ကို ခွဖက်ပြီး တစ်ဖက်ကိုလှိမ့်ချလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အပေါ်ကိုရောက်သွားတော့တာပေါ့။ အခုတော့ကျွန်တော်ဆောင့်ရမည့် အလှည့်ပဲ။ မိန်းမတို့ရဲ့ စိတ်က အတော်ဆန်းကျယ်သားဗျ။ အရုပ်လိုပဲ ကိုယ်ကလိုက်ရင်သူပြေး ကိုယ်ပြေးရင်သူလိုက်သကိုး။အခုပဲကြည့်လေ မမျှော်လင့်ပဲ မုတ်ဆိတ်ပျားမှာ ပျားရောပိတုန်းရော စွဲတာ။ ဒူးကွေးပေါင်ကားပြီး ဖြဲပေးထားတဲ့ ချိုရီစောက်ဖုတ်ထဲကို ကျွန်တော့်လီးအဆုံးအထိနှစ်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ ““ အင်း ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေးရယ် သိပ်ကောင်းတာပဲ ”” ပြီးတော့လီးကို ဒစ်မြုပ်ရုံလေးချန်ပြီး ပြန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
အံတဈခကျြကွိတျလိုကျပွီး စကဒျဒုံးကညျြတဈလုံးလို အားနဲ့ဆောငျံလိုကျတယျ။ ခြိုရီရဲ့ သားအိမျကို ဒုတျကနဲ ဆောငျ့ပွီး ခြိုရီတဈယောကျ ကုနျးတတျသှားပါတယျ။ စောကျခေါငျးထဲကလဲ ပွဈနတေဲ့ အရညျတှပှေကျကနဲ အံကလြာပါတယျ။ ဒီလို အခကျြနှဈဆယျလောကျလဲ ဆောငျ့ပွီးရော ခြိုရီစောကျခေါငျးထဲကရော ကြှနျတေျာ့လီးပါ ပူလာပါတော့တယျ။ ဒီတော့ ခပျမွနျမွနျလေးပွီးအောငျ မွနျမွနျပဲဆောငျ့ပေးလိုကျတာ ခြိုရီစောကျဖုတျအတှငျးသားတှဟော ကြှနျတေျာ့လီးကို သတ်ျတဝါတဈကောငျလိုစုပျခလြိုကျတော့။
အမလေးဗျာ တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ သွေးတွေဟာ လီးထဲက ပန်းထွက်လာသလား အောက့်မေ့ရတယ်။ သုတ်ရည်တွေတလဟော ချိုရီရဲ့ သားအိမ်ကို အားရပါးရ ပန်းချလိုက်ပါတယ်ချိုရီလဲအင်မတန်အားရတဲ့ပုံစံနဲ့ ဖင်ကြီးတွေကော့တက်ပြီး ကျွန်တော့်လီးကို သားအိမ်နဲ့ ညှပ်နိုင်သမျှ ညှပ်ထားပါတော့တယ်။ မောမောနဲ့ ချိုရီပေါ် ထပ်ကျညပီး မှိန်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ချိုရီက ပွတ်သပ်ပေးရင်း မျက်နှာ တစ်ပြင်လုံးနေရာလပ်မကျန်ရအောင် လျှောက်နမ်းနေပါတယ်။ ““ မောင်လေး အိမ်ထောင်နဲ့လား ””
““ ဟင့်အင်း လူပြို လူပျိုမဟုတ်ဘူးနော် ရရစ်နဲ့ ပြိုတဲ့ လူပြို ”” ““ မင်းလီးကြီးက သိပ်ကောင်းတာပဲကွယ် မမဖြင့် အခုထက်ထိတောင် စောက်ခေါင်းထဲမှာ အရသာတွေ့နေတုံးပဲ ”” ““ မမယောက်ျား ရော ”” ““ သူကဆုံးသွားပြီလေ မမလဲသူဆုံးကတဲက ဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှ မအိပ်ရ အခွင့်အရေးကလဲမရ ယောက်ျားလဲမတွေ့တော့ မမရဲ့စိတ်တွေကို အတင်းချုပ်ထားရတယ် အခေါင်းထဲမှာလည်းမခံနိုင်အောင်ယားလွန်းလို့ ငိုခဲ့ရတဲ့ ညတွေလည်း မနည်းဘူး ကွယ် အခုမောင်လေးနဲ့ အားရပါးရ လုပ်ကိုင်ရတော့မှ မမစိတ်တွေငြိမ်ရတော့တယ် မင်းနောက်ဆိုနေ့တိုင်းလာပေးနော် မောင်လေး ””
““ ရှင်တော်တော် ယုတ်မာပါလား ဟင် ညီမကိုရအောင်ချိုင်ပြီးတော့ မမကိုပါယူတယ် ရှင်လူယုတ်မာ ဟင်း ဟင်း ဟင်း ”” ဟိုက် … ဘယ်တုန်းက ချိုချို နိုးပြီး အနားရောက်လာတယ်မသိဘူး … ကွိုင်ပဲ။ .. ““ ဟဲ့ ညီမလေးနေအုံး ဒီကစ်္စဟာ သူဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူး မမစလို့ဖြစ်ရတာ မမလဲမနေနိုင်လွန်းလို့ သူကိုကပ်ရတာပါကွယ်။ နင်သူနဲ့ ဖြစ်ခဲ့တယ်တာလဲ သိပြီးသား နင့်ထဘီမှာသွေးတွေပေပြီး နင်တို့နှစ်ယောက်အတူ လမ်းလျှောက်လာကတဲက နင်တို့ ကိစ်္စပြီးခဲ့မှန်းသိတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ ငါသူ့ကိုစည်းရုံးရဲတာပေါ့ ”” ““ ဟင် မမသိရက်နဲ့လုပ်တယ် ဟုတ်လား ရက်စက်လိုက်တာ မမရယ် မမလင်ယူပြီးတာတောင် သူများရဲ့ ”” ““ ဟဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ သဘောနဲ့ ခံစားချက်ကို နင်ကြီးမှသိလာမယ် ညီမလေးရယ် ငါမနေနိုင်လွန်းလို့ သူ့ကိုလုပ်ခိုင်းရတာပါ ”” ““ မနေနိုင်ရင် ခြံအလုပ်သမား ထွန်းတင်နဲ့ အိပ်ပါလား အခုတော့ ချောချောနုနုလှလှလေးကိုမှ အရယူရသလား ”” ““ ပြောပါ ညီမရယ် ပြောပါ မမရဲ့အပြစ်ပါပဲ ”” ““ လက်ခုပ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်တီးမှမြည်တာပါ ””
““ သူနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး ကွယ် ”” ““ ဆိုင်တယ် ဆိုင်တယ် ကျမကို အပျိုရည်ပျက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ ရက်တောင်မပြောင်းမခြားပဲ အစ်မရင်းနဲ့ စိတ်ရှိလက်ရှိလုပ်နိုင်တဲ့လူကို ကျမဘယ်လိုလုပ်ခွင့်လွှတ်နိုင်ရမလဲ ”” ““ ကဲ ညီမရယ် မမတို့နှစ်ယောက်လုံး သူနဲ့အညီအမျှချစ်ကြတာပေါ့ကွယ် ”” ““ ဟင့်အင်း မရဘူး မမကလင်ယူဘူးတော့ သူ့ကိုပိုဆွဲဆောင်နိုင်မှာပေါ့ သူ မမကိုချစ်မှာပဲပေါ့ ”” ““ မဟုတ်ပါဘူး ချိုချိုရယ် မင်းလေး သဝန်မတိုစပ်းပါနဲ့ ကိုယ်မင်းကိုပိုချစ်ပါတယ်ကွာ။
မမကိုလဲ သနားမိတာပေါ့ သူလဲလူသားပဲ ဆန်္ဒလေးတွေတော့ရှိမှာပေါ့ နဲနဲကိုယ်ချင်းစာပါအုံး အချစ်ကလေးရယ် ”” ကျွန်တော်တို့ အခြေအတင်ပြောနေတုံး စိုရွှဲပြီးပြောင်လက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လီးကြီးကို တလှည့် ဖြူပြစ်ပြစ် အရည်တွေ ယီးလေးခိုနေတဲ့ ချိုရီစောက်ဖုတ်ကို တလှည့် ချိုချိုတစ်ယောက် မျက်စိကစားနေပါတယ်။ ဒါကိုသတိထားမိတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ လီးကို အတင်းတောင်လာအောင်အားစိုက်ပြီး မသိမသာ ထောင်ပေးနေမိတယ်။ ““ သူကလဲ အမျိုးမျိုး အခုနကပဲ ချိုချိုကို ချစ်ပါတယ်လေး ဘာလေးနဲ့ အခုနံရံတစ်ဖက်ခြားရုံနဲ့ တခြားတစ်ယောက်ကိုချစ်တဲ့ သူကို ဘယ်လို ယုံရမှာလဲ ””
““ အိုး ယုံရမှာပေါ့ကွာ။ မင်းတို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်လုံးကို ပိုင်ရမှတော့ ဘယ်သူနဲ့သွားပြီး ရှုပ်နေနိုင်တော့မလဲ မင်းကလဲချစ်ဖို့ကောင်း မမကလဲကြိတ်စရာကြီးဆိုတော့ ကိုယ်မင်းတို့နားပဲကပ်နေမှာပါကွာ ”” ““ ကဲ ညီမလေးလာ မမဘေးမှာလာထိုင် ”” ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အိကနဲ ထိုင်ချလိုက်တဲ့ ချိုချိုကို ကျွန်တော်က ထဘီချွတ်လိုက်သလိုသူ့အစ်မကလဲ အင်္ကျီကို ချော့မော့ပြီး ချွတ်ချနေပါတယ်။ ပထမတော့ ရှက်သလိုလုပ်နေပေမဲ့ သူ့အစ်မက အမျိုးမျိုးနားချပြီး ကိုယ်တုံးလုံးလုပ်လိုက်ပါတယ်။
မီးရောင်အောက်မှာ စံချိန်မှီ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နဲ့ဒီမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဟာ ရှေးခေတ်ရောမ ကျောက်ရုပ်လေးတွေလို အင်မတန်လှပနေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကို ကျွန်တော်တောင် နတ်သားတစ်ပါးလို အထင်ရောက်မိပါရဲ့။ ဟုတ်တယ်လေ အခုလဲ နတ်စည်းစိမ်ကို ခံစားနေရတယ်မဟုတ်လား။ အမယ်မယ် အကြီးမက ရဲတင်းသလောက် အငယ်မက ရှက်နေသဗျာ။ ပေါင်လေးကိုလိမ်ပြီး စောက်ဖုတ်လေးကို ဖွက်ထားတယ်။ ဒါကိုက ချစ်စရာတစ်မျိုးပဲ။
““ ညီမလေး ပေါင်ကိုစိမထားနဲ့ကွယ် ဘာလဲရှက်လို့လား မရှက်ပါနဲ့ ညီမလေးရယ် ညီမလေးက ကံကောင်းတယ်လို့မှတ်ထား။ အစ်မကိုယ်တိုင်က ညီမလေးကိုလက်တွေ့ လူ့ဘဝရဲ့အရသာကို သင်ပေးတယ်ဆိုတာ အင်မတန်ဖြစ်နိုင်ခဲတဲ့ကိစ်္စပဲ။ အခု မမက ညီမကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ယောက်ျားကိုကြိုးကိုင်နိုင်တဲ့နည်းတွေ သင်ပေးမယ်နော် ရှက်မနေနဲ့ ”” ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ သူ့ညီမရဲ့ နားရွက်လေးတွေကို လျှာဖျားလေးနဲ့ တို့ပြီးနှုတ်ခမ်းထဲ ငုံပြီး စုပ်ယူနေပါတယ်။
ကောငျမလေးခမြာ ကွကျသီးတဖွနျးဖွနျးထပွီး သူ့အဈမရဲ့ နို့တှကေို ကိုငျမိကိုငျရွ ဆုပျထားပါတယျ။ နားရှကျတှကေနေ တရှေ့ရှေ့နဲ့ ခြိုခြိုရဲ့နှုတျခမျးစုံကို ငွငျငွငျသာသာငုံပွီး စုပျယူနပွေနျပါတယျ။ ကြှနျတျောလညျး အငွိမျမနတေော့ပါဘူး။ လုံးဝိုငျးကွီးမားလှတဲ့ ခြိုရီရဲ့ နို့တဈလုံးကို လကျနဲ့စုံကိုငျပွီး နို့သီးတှကေို ငုံပွီးစုပျယူပေးနတေယျ။ အခုနက အရှိနျမသသေေးတဲ့ နို့အုံဟာ ပွနျပွီးတငျးမာလာပွနျရော။ နို့အုံတဈခုလုံး ဖနျတုံးကွီးလို တလကျလကျဖွဈအောငျ လြှာနဲ့ လြှောကျယကျပေးနတေယျ။
သူလဲအရသာတွေ့ပုံပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့အရသာတွေကို သူ့ညီမကိုလွှဲပေးလိုက်ဟန်တူတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့နှုတ်ခမ်းဟာ ချိုချို လည်ပင်းတစ်လျှောက်တရွရွနဲ့ ပင့်ကူတစ်ကောင် လမ်းလျှောက်သလို လျှောက်သွားနေပါတယ်။ လျှာကလဲ တို့လိုက်ထိလိုက်နဲ့မို့ ချိုချိုတစ်ယောက် တဟင်းဟင်းနဲ့ တွန့်လိမ်နေပါတယ်။ သူ့ညီမနို့တွေကို ချိုရီဟာ ငြင်ငြင်သာသာနဲ့ နယ်ပေးနေပါတယ်။ တကယ့်ကို ယုယုယယနဲ့ ခင်ဗျာ။ ကြွေကျမယ်များထင်နေသလားမသိ။တရွေ့ရွေ့နဲ့ သူ့ညီမရင်ဘတ်ကို လျှာနဲ့လျှောက်ယက်ပေးနေတယ်။
ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးမှာလဲ အနီရောင်ကွက်တွေ ထင်နေအောင်ပါပဲ။ ပါးစပ်နဲ့စုပ်ပြီး ယက်ပေးနေတယ်။ ပတ်္တမြားတွေရင်ဘတ်ပေါ်မှာ တင်ထားသလားပဲ။ ချိုရီဟာဒီပညာတွေ အတော်လိုက်စားဟန်တူပါရဲ့ ချိုချိုကို ပညာကုန်သုံးပြီး ထလာအောင် ရွလာအောင် ကြွလာအောင် လုပ်ပေးနေပါတယ်။ ဖွဖွလေးနမ်းရင်းနဲ့ ချိုချိုစောက်ဖုတ်ဆီကို ခရီးဆန့်နေပါတယ်။ စောက်မွှေးနုနုလေးတွေကို လေနဲ့မှုတ်ပေးရင်း ယုယကြင်နာဟန်နဲ့ ကြည့်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆီးခုံပေါ်က အပြင် နှုတ်ခမ်းကြီးနှစ်ခုဆုံတဲ့ စောက်ဖုတ်ချိုင့်လေးကို ငုံပြီး စုပ်ယူနေမိတယ်။
ကျွန်တော်ကရော ကျွန်တော်လဲအငြိမ်မနေပါဘူး။ ချိုရီနို့တွေကို အားရအောင်စုပ်ပြီး လေးဘက်ထောင်ပေါင်ကားထားတဲ့ချိုရီရဲ့ ဗိုက်အောက်ခေါင်းသွင်းပြီး စောက်ဖုတ်နဲ့ တည့်တည့်နေရာယူလိုက်ပါတယ်။လုံးကျစ်တင်းမာနေတဲ့ တင်ပါးကြီးကို အသာဆွဲနှိမ့်ရင်း စောက်ဖုတ်ကို မျက်နှာပေါ်ရောက်အောင် ဖိချလိုက်ပါတယ်။ ပေါင်ကားထားလို့ စောက်ဖုတ်ဟာ ပြဲနေပြီး အတွင်း နှုတ်ခမ်းဟာ နှင်းဆီတစ်ပွင့်လို နီညိုရောင် သန်းပြီးပွင့်ဖတ်တွေလို ခွေလိပ်နေလေရဲ့။
ချိုရီလဲ ချိုချိုစောက်ဖုတ်ထဲက တရွေ့ရွေ့နဲ့ လျှာကလေး သွင်းရင်း စောက်စေ့ကလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ မထိတထိ ကလိပေးနေပါတယ်။ ချိုချိုဟာ ပြင်းပြတဲ့ ဝေဒနာကြောင့် တွန့်လိမ်ပြီး ချွေးဆီးတွေကျလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူ့အစ်မကလဲ ညီမလေးကို စေတနာအပြည့်နဲ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို လက်မနဲ့အသာဖြဲရင်း စောက်ဖုတ်ထဲ နစ်သထက်နစ်အောင် မျက်နှာကို ထိုးသွင်းနေပါတယ်။ ““ မမ မမ အင်းဟင်း ဟင်း ဟင်း ချိုချို မနေတတ်တော့ဘူး မမရဲ့ ”” ဟုတ်ပါတယ် ချိုချိုမနေနိုင်ပါဘူး
ချိုချိုမနေနိုင်သလို ချိုရီလဲမနေနိုင်ပါဘူး သူရဲ့ အဆီတွေပြည့်ပြီးဖောင်းတင်းနေတဲ့ စောက်ဖုတ်မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ လျှာကြီးထဲ့ပြီး တပြတ်ပြတ်မြည်အောင် ယက်ပေးနေမိတယ။ စောက်စေ့ကလေးဟာ သူတကာထက်ကြီးတာမို့ ထင်ထင်ရှားရှား သိနိုင်ပြီး နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားမှာညှပ်ပြီး လျှာနဲ့ အသာပွတ်ပေးတော့ ချိုရီခမျာ ဖင်ကြီးတွေကို နှိမ့်လိုက် မြင့်လိုက်နဲ့ အတော်ကြီး အရသာတွေ့နေတယ်ခင်ဗျာ။ စောက်ခေါင်းထဲမှာ လျှာကြီးကို အသာထည့်ပြီး မွှေယက်ပေးနေမိတယ်။
စောက်ခေါင်းရဲ့ အသားလေးတွေ နူးညံ့လိုက်လေခြင်း တကယ့်ကို ဝါဂွမ်းကလေးလိုပျော့အိပြီး နွေးနေတယ်။ သူ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားခွေလိပ်ကလေးတွေကို ငုံပြီး ယုယုယယ စုပ်ထားတော့ အားရလွန်းလို့လား မသိဘူး။ ““ ဘူ ”” ကနဲ လေတွေပန်းထွက်လာပါတယ်။ စောက်ခေါင်းထဲ ကနဲနဲကျလာတဲ့ အရည်တွေကို လက်နဲ့တို့ပြီး ဖင်ပေါက်ဝကို အသာထိုးတဲ့လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လက်ညှိုးကို သွင်းလိုက်ထုတ်လုပ်ပေးနေတော့ ချိုရီခမျာ အရသာအတွေ့ကြီးတွေ့ပြီး ကျွန်တော့်ပါးစပ်ပေါ် စောက်ဖုတ်ကြီးကိုဖိကပ်ထားပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ချိုချိုတစ်ယောက် အသက်နှုတ်ခံရသလို ဝူးဝူးဝါးဝါး အော်ရင်း စောက်ဖုတ်ထဲက အရည်တွေ စီးကျလာပါတော့တယ်။ ချိုရီလဲ လက်လွှတ်မခံပဲထွက်သမျှဟာတွေကို ကန်ထရိုက်ယူသလို လောဘတကြီးနဲ့ ယက်မြိုချလိုက်ပါတော့တယ်။ ချိုချိုကတော့ ကောင်းလွန်းတဲ့အရသာကိုပက်လက်ကလေးငြိမ်ခံပြီး မှိန်းနေလေရဲ့။ ရှေးမနှောင်းမှာပဲ ချိုရီလဲ ကျွဲမတစ်ကောင်သေးပေါက်သလို စောက်ခေါင်းထဲက အရည်တွေ ပါးစပ်နဲ့အပြည့် ဝေါခနဲသွန်ချရင်း အိပ်ယာပေါ် လဲကျသွားပါတော့တယ်။
ခဏနားပြီး ချိုရီဟာ ကျွန်တော့်လီးကို လက်ဖြင့်ကိုင်ပြီး ပါးစပ်မှာတေ့ရင်း စုပ်လိုက်ယက်လိုက် လျှာနဲ့ကလိလိုက် ခေါင်းကို ရှေ့တိုး နောက်ငင်နဲ့ ဂွင်းတိုက်ပေးနေတဲ့ ပုံစံမျိုးစုံ ကလိပေးနေလိုက်တော့ ဘသားချောလဲ ရဟန်္တာမှ မဟုတ်တာ ငေါက်ခနဲ ထလာပါရော။ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ကို ရွေးသလိုလိုနဲ့ တယမ်းယမ်းရယ်။ သံချောင်းကြီးလို တင်းမာနေတဲ့ လီးကို ပါးစပ်ထဲမှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ငုံရင်း မြှင်းပြီး ညှစ်နေလေရဲ့။ ““ အိုး မမရယ် ကောင်းလိုက်တာ အင်း ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ် အိုး အား အား အား ယား ”” ကျွန်တော့်ရဲ့ ဝေဒနာကို ခင်ဗျားတို့တွေ့ရင် သနားသွားမယ်။
လူးလိမ့်ပြီး အံကြိတ်လိုက်၊ လက်သီးဆုပ်လိုက်နဲ့ အပြင်းအထန် ဝေဒနာခံစားနေရတာကိုး။ သူမရဲ့ ခေါင်းကို ဆံပင်အရင်းကကိုင်ပြီး လီးနဲ့ အတင်းဆောင့်နေမိတယ်။ ““ မမ….. မမ….. အိုး….. အား….. ပြီးတော့မယ်။ ပြီးတော့မယ်….. ပြီးပြီ….. ပြီးပြီ….. အား….. ”” ရေစုပ်စက်နဲ့ စုပ်တင်လိုက်သလို လီးထဲက တရှိန်ထိုး ထွက်လာတဲ့ သုတ်ရည်တွေဟာ ချိုရီရဲ့ အာခေါင်ထဲကို ဝုန်းဆိုပန်းထွက်ပြီး မျိုချစရာမလိုပဲ လည်ချောင်းကနေတဆင့် ဝမ်းထဲထိ ရောက်သွားပါတယ်။
(၁၅)မိနစ်လောက် မှိန်းပြီး သူ့ညီမချိုချိုခြေထောက် နှစ်ချောင်းကို ဆွဲမလိုက်ပြီး မတ်တပ်အနေအထားနဲ့ ဖြဲပြီးကိုင်ထားပါတယ်။ ချိုချိုရဲ့ ဖင်ဟာ ကြမ်းနဲ့လွတ်ပြီး လေထဲမြောက်နေတာပေါ့။ ချိုချိုရဲ့ ပေါင်ကြားထဲ အသာဝင်ပြီးပြန်ပြီးတောင်မတ်စပြုနေတဲ့ ငပဲနဲ့ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးတစ်လျှောက် လိုက်ပွတ်ပေးနေတော့ ချိုချိုဟာ တဟင်းဟင်းနဲ့ အချက်ပေးလာပါတယ်။ ခါးကျဉ်းကျဉ်းလေးကို စုံကိုင်ပြီး ဟနေတဲ့ စောက်ခေါင်းဝ ဒစ်တေ့လိုက်ပါတယ်။
အသက်အောင့်ပြီး ဆောင့်ချလိုက်ပါတယ် လီးဟာ တဗြစ်ဗြစ်နဲ့ထစ်ထစ်ဝင်သွားပြီး ဒုတ်ကနဲ အသံထွက်လာပြီး ချိုချိုလဲ တအားအားနဲ့ ငြီးနေပါတော့တယ်။ အချိန်ဆွဲမနေတော့ဘူး။ တရမ်းရမ်းဖြစ်နေတဲ့ ခါးကိုလက်နဲ့ငြိမ်အောင် စုံကိုင်ရင်း မညှာတမ်းဆောင့်လိုးပေးနေမိတယ်။ ချိုချိုလဲကြည့်ရတာ အားရပုံပဲ ကိုင်ထားတဲ့ခြေကျင်းဝတ်တွေကို ပိုပြဲအောင်ဆုပ်ကိုင်ပြီးပေါင်ကို ထပ်ဖြဲလိုက်သလို ပိုပြီးလည်း မြင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ စိတ်ရှိသလို မြန်မြန်တစ်မျိုး နှေးနှေး တစ်ဖုံ အားရပါး ဆောင့်နေမိတယ်။
စောက်ခေါင်းထဲမှာ လီးကို အဆုံးထိထည့်ပြီး လော်ရီကားတွေ ဂေါက်ကြီးနဲ့ စက်နှိုးသလို မွှေပေးလိုက်တော့ ငယ်သံပါအောင် အော်ပါလေရော။ အခုနက ရခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတွေလဲ ပြန်ပေါက်ပြဲပြီး သွေးတွေကျလာပြန်ပါတယ်။ စောက်ဖုတ်တပြင်လုံးနဲ့ ကျွန်တော့်လီးတစ်ခုလုံး နီရဲပြီးဆေးဆိုးထားသလိုပါပဲလား။ ကျွန်တော့်စိတ်ထင် အချက် (၁၀၀- ၁၂၅)လောက်လဲ ဆောင့်ပြီးရော ချိုချိုစောက်ခေါင်းက သွေးတွေနဲ့ ရောနေတဲ့ အရည်တွေတစိမ့်စိမ့် ဆင်းလာပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်လဲမခံနိုင်တော့ပါဘူး။
သားအိမ်နံရံကို ပစ်မှတ်ထားပြီး သုတ်ရည်တွေ မနားတမ်း ပန်းချလိုက်ပါတော့တယ်။ မောမောနဲ့ ပက်လက်လှန် အိပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ပေါ် ချိုရီဟာ အုပ်မိုးရင်း သူ့ညီမသွေးတွေ အရည်တွေ ကျွန်တော်ရဲ့ သုတ်ရည်တွေပေကျံနေတဲ့ လီးကို ပါးစပ်ထဲ ငုံရင်း ပေကျံသမျှကို စုပ်ယူနေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲကလည်း ပွဲတိုင်းနိုင်စစ်သူကြီး တစ်ယောက်လို ခမောက်ကြီး တကားကားနဲ့ ခေါင်းပြန်ထောင်လာရော။ တောင်တာမှ တကယ့် သံမဏိချောင်းကျနေတာပဲ။ သိပ်အချိန်မဆွဲတော့ဘူး။
လေးဘက်ထောက်ပြန်ပြီးကုန်းပေးနေတဲ့ ချိုရီ စောက်ဖုတ်အိအိထဲလီးကို ရှောခနဲ သွင်းချလိုက်တယ်။ ချိုရီကတော့ ကြိုက်တဲ့ပုံပဲ .. ပိုထိတဲ့နည်းကိုး။ တအင်းအင်းနဲ့ ဝင်လာသမျှအချက်တိုင်းကိုတောင့်ခံနေတယ်။ ချိုင်းအောက်ကနေ လက်လျှိုပြီး နို့သီးတွေကို ဆုပ်ချေပေးနေရင်း လီးကို ဒုတ်တစ်ချောင်းလို သတ်မှတ်ပြီး သားအိမ်ကွဲမတတ် ဆောင့်ပေးနေမိတယ်။ ချိုရီခမျာ အရှ့ကို စိုက်ကျသွားပြီး ပေါင်လဲ ကားသထက်ကားလာပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ရမက်မီးကြောင့် မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ညှာတာရမှန်းမသိတော့ပါဘူး။
ညှာလဲ ဒီမိန်းကလေးက ကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒီတော့ မနားတမ်း တအုန်းအုန်းမြည်အောင် ဆောင့်တော့ ခိုင်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ တဲလေးဟာ သိမ့်သိမ့်တုန်နေတယ်။ ““ အား….. အား….. ”” နှစ်ယောက်စလုံး ပြိုင်တူပြီးလို့ အသက်ထွက်သလိုအော်ရင်း ထပ်ကျသွားပါတော့တယ်။ ဩ…….ဟိုမှာ နံပါတ် ၈ လာနေပြီ…. လာသွားမယ် ဟုတ်တယ်လေ… ခေတ်ကြီးကိုက သုတ်သုတ်စား သုတ်သုတ်သွားမှ စကားကောင်းနေလို့ ကျွန်တော်တို့စီးရမယ့်ကားလာနေပြီ။ မပြတ်သေးတ့စဲ ကားကိုအတင်းဖြတ်ပြီး. … မှတ်တိုင်ကျော်ရပ်တဲ့ကားနောက်ကိုခွေးတစ်ကောင်လိုပြေးလိုက်ရတယ် မပြောချင်ပါဘူးဗျာ…
မနက်နဲ့ ညနေဆို ကားစီးရတာလူနဲ့ကိုမတူဘူး…ခေတ်ကြပ်ကြီးထဲမှာကိုရွှေ စပါယ်ရာတွေကလည်းယဉ်ကျေးပါပေတယ်။ သင်တန်းဆင်းလာသလိုပါဘဲ။ ““ကဲ…လက်မှတ်ဝယ်ကြပါ….တစ်ကျပ်လေးနဲ့လက်မတို့ရစေနဲ့….ဟိုဘက်ကဘကြီးရှေ့တိုးပါ။ မကျေနပ်ရင်ရှေ့မှတ်တိုင်ဆင်းနေခဲ့။ရှေ့ကညီလေးပိုက်ဆံထုတ်ထားကွာ….တစ်ကျပ်လေးကို သူတောင်းစားလိုလိုက်တောင်းနေရတယ်”” ““ကားခပေးကြပါဗျ။”” အဲ့ဒါပဲကြည့်တော့….ကျွန်တော်လည်း အအော်ခံရမှာကြောက်တာနဲ့…တစ်ကျပ်ကို နှမြောတသစွာနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
““စံပြလား…စံပြ…ရှေ့ထက်ွထားကြပါခင်ဗျားတို့မေးနေတာ နဲ့မိုးလင်းတော့မှာပ။ဲ ရှေ့တိုးပါ…မှတ်တိုင်ပါတယ်ဆရာရေ”” အိုး .. စိတ်ညစ်စရာကောင်းလိုက်တာ…တက်ကြဆင်းကြနဲ့ ဒီလိုပဲနေ့တိုင်းကြုံနေရတော့…ဒီအချိန်ရောက်ရင်ရူးချင်တယ်… အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့ကိုယိုင်ဆင်းသွားအောင် ကြိမ်ခြင်းကြီးနဲ့တိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ စိတ်တိုတိုနဲ့ရန်တွေ့မယ်လုပ်တော့…လားလား…တော်တော်ချောတဲ့ကောင်မ လေးတစ်ယောက်ပဲ။ ““ပေး…ညီမ…ဒီခြင်းကြီးနဲ့ဆို ကားအလယ်ကောင်မှာ လူတွေဒုက်္ခရောက်နေမယ်။
”” ကောင်မလေးက ကျေးဇူးတင်တဲ့အပြုံးနဲ့ ခြင်းတောင်းကိုကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ကားကလည်း ကြပ်သထက်ကြပ်လာတာမို့…ခြင်းတောင်းမရှိတော့တာနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်ဟာကော်နဲ့ကပ်ထားသလို ကပ်နေပါတယ်။ ကောင်မလေးကတော့အနေခက်ပုံပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုနေမယ်ထင်လဲ။ ကောင်မလေးက တောင့်တောင့်တင်းတင်းလေးဗျ။ ကြည့်ရတာပန်းရောင်းပုံပဲ။ ခမ်နွမ်းနွမ်းကလေးဆိုပါတော့…..ရုပ်ကလေးကတော့ သနားကမားလေးလေးပဲ…..ဆံပင်ကိုရှေ့က ဆာမူရိုင်းကေညှပ်ပြီး နောက်မှာ ကျစ်ဆံမြီးလေးချည်ထားတယ်။
မျက်လုံးလေးတွေက ဇင်ယော်တောင်လို ကော့နေပြီး မျက်တောင်ကျတော့ ကော့ပြီးနက်နေတာဲ့။ မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာ အလှဆုံးကမျက်လုံးပဲဗျာ…..ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ချစ်ချင်လာတယ်…..ဝိုင်းပြီးညိုတိုတိုနဲ့ ရွှန်းလဲ့နေလေရဲ့။ နှာခေါင်းလေးဟာ နဖူးကနေ ပြေဆင်းလာပြီး နှာဖျားနဲနဲကော့တယ်။ လန်လန်လေးပေါ့။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ညီအဈမနှဈယောကျ